Facebook GPO Dhaamssa guyya guyyan darbuu dubisaa Harraa
BILISUMMAA !!! Freedom!!!
Mootii Biyya, Wolda yohannes Werkeneh and Gammachuu Malkaa
We Happy that Mootii Biyya, Wolda yohannes Werkeneh and Gammachuu Malkaa books reprinted by the support of innocent Oromo like Dararaa Maattii (Oromia publishers) read the blow Oromo suggestions.
Thank you very much for reminding us one of the golden efforts made by the legend Oromo writer Obbo MOOTII BIYYAA. Using this opportunity I would like to ask you to find Obbo Moti Biyya’s whereabouts and bring him back to the public media. He should be identified and remembered forever as one of the most influencial Oromo heros.
I can say Motii Biyyaa was a true nationalist who managed to shape the mindes of, particularly, Oromo youth in the 1990s in the struggle against TPLF and old Nefxenya remenants.
His book entitle “Oromiyaan Be Ferekaa” has been used by many Oromos as a weapon to beat the illogical and unfounded Habesha legends. This book was also produced as evidence by TPLF cadres/securities to justify their unjust actions against Oromo nationalists in their detention centers.
If you have contact of Moti Biyyaa, could you please ask him to reprint or make this book accessible online too?
Mootii biyyaa’s books are not simply books. They are freedom fighters for Oromo national struggle. A single habasha can’t withstand it. They can’t deny the logical truth in these books. Please! Those of us who are claiming for Oromo Freedom, let’s read and arm our selves with in-out nationalism. The one, who read these books is armed much more arm than AK47 or any other machine gun.
Hundaa dursee nagenyii oromummaa sabontoota lammi koo yaa gahu jedhuun barbaada. Itti ansun maalo maloo obboo MOOTI BiYYAA bakkan inni jiruu nu barbaada rabig jedhaa. Yeroo dheeradhaaf mana hidhaa wayyenee keessati rakkachaa ture dhumma irratti summin ajjessuf yaalanile gargarsaa rabi fi doktorotan lubbun hafeeran dhaga’ee. Waa’ee gidiraa isarra ga’aa ture fi maliraa akka jiruu namoon bayyen beeku barbaadu. Goota/ lenca/ hayyu oromoo kana barbaadne yaa arganun dhamsaa kootii
Thank you very much for your effort to empower Oromo and Oromummaa!! I would also like to thank the contributors and above all Wolde Yohannes Workeneh and Gammachuu Malkaa.
The following excerpt from the book, “OROMIA: Ye Tedebekew Ye Gif Tarik” (roughly translated, “OROMIA: The Hidden History of Crimes Against Humanity”), authored by Wolde-Yohannes Workneh and Gemechu Melka, was sent to Gadaa.com by an independent contributor to be used as a response to this program aired on ESAT.
Please inform us if you got the address of Mooti Biyya, W/Yohannes and Gemechuu Malka by gpo.info@yahoo.com
Ethsat TV's Shocking Video: Qubee, Usage of Afaan Oromoo, Oromiyaa Part of Fascism Mar 19, '12 5:43 PM
Barattoota Oromoo University Arbaminc
Gara :- Waajjira Pirezedaantii Yuunivarsiitii Arbaaminciif
Tel: 468810771 E-mail: president@arbaminch-uni-com
Dhimmi isaa Deebii Hatattamaa gaafachuu ta’a.
Duraan dursinee Gaaffiilee kabajaan isinii dhiyeessinu kanatti bakka guddaa kennuun deebii hatattamaan akka nuu kennitan abdii qabna.
Kunis Gaaffiin Mirgaa barattootni Finfinnee gaafatan gaaffii ilmaan oromoo waanjoo garbummaa baachuu dadhabee ta’uu fi gaaffiin kun guutummaan guutuutti gaaffii barattoota oromoo yuunivarsiitii Arbaaminc kampaasii hundaa ta’uu ibsina.
Nuyi barattootni Oromoo yuunivarsiitii kanaas gaaffiileen armaan gadii kun hatattamaan akka nuuf deebi’an jechuun dhiyeessinee jirra.
1.Barattootni Oromoo,Dargaggootni Oromoo guutummaa guutuun ilmaan oromoo bara baraan maaliif mana hidhaatti guuramu? Yuunivarsiitii barnootaaf dhufan keessatti maaliif reebamu? Maaliif dhiphachaa jiraatuu?
2.Maqaa Waldaa Misooma Oromiyaa jedhuun maallaqni baay’een ilmaan oromoo irraa funaanamaa ture.Osoo piroojektiin jalqabame hin xumuramiin Maqaa hidha Abbayyaa jedhuun funaansi maallaqaa jalqabame.Kan Waldaa Misooma Oromiyaa eessa dhaqe? Osoo kan Waldaa misooma Oromiyaa hin xumuramiin maaliif kan kanatti gufuu ta’u uumame?
3.Yuunivarsiitiilee biyyattii keessatti baay’inaan kan dursu barattoota Oromooti.Kanaaf yuunivarsiitiilee keessatti afaan Hojii maaliif Afaan Oromoo hin taane?
4.Faalamni qabeenya uumamaa Oromiyaa,Saamichi lafaa maqaa investimentiinii fi biyya irraa arii’uun uummataa maaliif Oromiyaa keessatti qofaa xiyyeeffate?
5.Barattootni Oromoo barnoota isaanii xumuran maqaa COC(Center of competent) jedhamuun hojii akka hin qabanne danqamu.Kun Oromiyaa fi ilmaan oromoo qofaa irratti maaliif kan xiyyeeffate ta’e?
6.Dhaabbiileen barnootaa fi amantiin seera biyyattii keessatti bilisa akka dhiibbaa kam irraa bilisa akka ta’etti katabame.Garuu manneen barnootaa keessumaa bakkeewwan ilmaan oromoo baay’inaan argamanitti waraanaan eegama.Kun maaliif ta’e? Waan seera biyyaa jedhamee barreeffame hojii irra maaliif hin oolle?
7.Seera biyyattii keessatti naannooleen mirga of danda’uu hanga fottoquutti ni qabu.Kun maaliif hojii irra hin oolle?
8.Barattootni oromoo yakkaniis ta’e osoo hinyakkiin qabaman maqaa shororkeessummaan himatamu.Kun maaliif?
Walumaa galatti gaaffiileen armaan olii kun hatattamaan nuuf deebi’anii seerri biyyaas hojii irra waan hin oolleef mootummaan TPLF mootummaa sanyiin bulchu dargaggootni oromoo ,ilmaan oromoo cuftii fi sabawwan cunqurfamoo yoommuu ajjeefaman kan dhimma hin qabnee fi aangoo isaa dhiibbaa ilmaan oromoo irratti uumuun galii guddifachaa jiraachaa kan turee fi itti jiru waan ta’eef hoogganaan ministeerotaa Mallas Zeenaawwii aangoo gadhiisuun seeratti akka nuu dhiyaatu jechuun kabajaan gaafanna!
Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Arbaaminc
1. Waajjira caffee Oromiyaaf
2. Dhimmoota Federaalaa Itoophiyaaf
3. Waajjira Bulchinsa Yuunivarsiitiilee Itoophiyaaf
4. Bulchinsa magaala Arbaaminciif
Oromo-Ethiopia: Finfinnee University Students Demand Oromo Rights in Finfinnee
Finfinnee University students have demanded Oromo rights in Finfinnee, including statues in Finfinnee for Oromo nationalist martyrs, according to a report by SBO. Finfinnee is the capital of Oromiyaa, as well as the political capital of Africa. The Oromo is the largest nation in the Horn of Africa and Ethiopia, but a nation politically and economically marginalized and repressed for the last 120 years in its own homeland, Oromia.
The statue in the following videos is a sample design for the Oromo hero Gen. Taaddasaa Birruu in a proposed Oromo Nationalists Memorial Park in Finfinnee; it was designed by a Gadaa.com contributor. Gen. Taaddasaa was an Oromo nationalist freedom fighter, and he was executed by the Derg in 1975.
Kufatiin Muammar Gaddahafi Melese Zenawi ragga cimmadha. Ajeechaa, Hidha, reebicha fi biyya isaa irra irra'amuu ummanii Oromoo kana caalaa akka obsuuu hin gandeenye hubachuu qaba. Akkuma Melesi mana keenya dhufee gidiraa heeduu nu argisisee obseene akka hin jilbeenfaneef beekuu qaba. Melese Zenawi Oromoo abba feedheef Malaqa yoo latee Bilisumma Oromoo itisuu hin dandeesuu jeedfha Oromoon. Oromoon Malaqa fudhatee Habasha harma hootee ilee Habasha waliin daraa tata beek!!! Dhisii Gandumma ??, Fudhuu Oromummaa yoo dandeeti qabateef. Qabsoo hin lamsheesin siif obsnee dadabnee. Ni ga'aa. !!! Dhummi Abooti iirree salphina akkasiin xumurama link kana bana ilala.
End of dictator Col Muammar Gaddafi Ethiopian Meles Zenawi is the next, Gadhafi family had an estimated $60 billion and $85 billion in unaccounted money around the world before his death. Melese Zenawi Bank account also under investigation. End of Muammar Gaddafi good lesson for Melese Zenawi. Col Gaddafi is said to have had more that \_$200bn (£125bn) in cash and gold hidden away with some of it spread in secret accounts across the world.
Siirna Melese Zenawi keessati ijoole durba biyyoota Arabatii gurgurama jira rakkon irra ga'uu fi degerssa tokko Mootumma Wayyane irra dhabuun rakko isaan irra ga'aa jiru GPO july 2, 2011 international conference biyya Belgium Antwerpen irrati qoopheese irrati dhiyessun isaan ni yadatama . Dubartoon Ethiopia baina isiin Oromoo ta'aan Magala LebanosBerut keessa qoofa 15, 000 rakko gudda keessa kan jira fi biyoota Araba keessa Milyoonan kan lakawaman afaan iitin dhalatan ala afaan biroo kan hin beekne heedun giddra gudda irra kan jiran ta'uu isaa gabasan keenya Kuwit irra dhamsa nu dabarsee jira. Saudi Arabiya fi Yemen amoo lammin Ethiopia akka dhala namatii biyoota hin ilalee ta'uu ubatamadha. Yemen keessati ijoole durba fi dha'iiman rasasan yamuu rukutamn, lafa jalati hidhaman saree nyachisfama,bishan dhorkamn yamuu dheebun dhuman Oromoon garuu biyya isaa Keessati daloota Yeman Oromiya keessa Hararge, Jimma fi Finfinne jira akka matii isaati kununsa jira garuu waan isaan Oromoo irran ga'aa jiran tokko ilee quba hin qabuu .Mafiyan TPLF rakko Ethiopia irra biyya alati ga'uu kan hameesuu malee kan furmata barbaduuf miti, Biyoota Arba fi Afrika keessati rakko humamuu hunda fi bala lammi Oromoo irra ga'uu hundaf kan gafatamuu gartuu TPLF ta'uu isaa amuma isiin mirkaneesuu barbana. Link kana gadii xuuquun Liyabya keesati waan lammi Ethiopia tokko irra ga'ee irra waan gudda hunbachuu qabduu ilala dubsaa.
Gaddafi's Son Wife Aline Skaf Burn and torture Ethiopian girl Shwaye Mulla
Hamma maaltu ta'u qaba? Rundassa Eshete <kormmee@gmail.com>Sunday, September 11, 2011 9:06 PM
ABO machii irraa baraaruuf, Penxummaa doomssuuf, Arabummaa biyya Arabatti galchuuf, Oromummaan akka deebi'ee lalisu gochuu barbachisa. Oromummaan akka laisee marggu, akka Oromummaan Mujjaa q'ee fi kosii isaa irratti margge jiru of irraa cabssu, ilmaan Oromoo "Ani Oromoo dha" ofiin jedhan hunddi walitti yaa'anii sirnna ofii jajabessuu qabu. Sirnna Oromoo, jajabessuuf moo, Oromoo dhugaa, onnee Oromoo tin walitti dubbachuu calqabuu qabu.
Oromoo Oromummaa isaan dararama jira malee rakko amanta ykn rakko gandan miti.
Ijoolee Oromo Jiradha jirenya of keessati waan tokko hojeetan darbuu garidha. Waan hojeenuu sun garuu waan dursa keenamuuf ilala deemun garidha, rakkon atatamn fufmata barbadutuu jira. Wayyen ummata keessan akka hunda caala isiin dhukubuu nan amana; Balaa guddatuu ummata Oromoo dura dhabatee jira. Oromo samani qixeesan jiru; enyumaa isaa fi afaan isaa dhoksaa jiru, ajeessa; hidha; darara fi biyya ariacha jiru lafaa isaa irra buqisaa jiru lamiin keenya gara nu nyachuu qaba, hara biyya ala jirane ilee obboleetin , obboleesi, esummi, durbi fi adadan keenya biyya keessa jiru; mukii Oromiyaa keessa tigren cirtee fixee haali qileen,sa ilee badee kuno beeli Tigray ture hara Oromya dhufee misomi Oromya ture amoo Tigry deeme jira. Egaa yoo qabsoo Oromoo hunduma hirnfatan ilee Qeesi Gudina Tumsa hin hirnfatiina; Oromoof jeedhe ijoolee isaa facasee darbee, lubun iti mia'uu didee miti, sagalee waqa walalee miti; museen ilee ummata isaaf falmachuu isaa ragga bayee jira.
Rakkon Oromoo Hamata jira;
1. lafi Oromoo 1,819,234 hectar biyya alaf hirmee jira waggota darban lama kessa :
2. Oromumman badee Tigre-Ethiopia seena biyya ta'ee gudacha jira;
3. Amantan hundi meessha TPLF ta'ee jira; waqeefatan amoo cufamee jira;
4. Baratan Oromoo wagga waggan dhibbi heedun barumsaa irra ari'uun Oromoo domsaa jiru, barana amoo Baratoota Oromoo 2,000 university Adama fi Arbamici jira summin nyachisan jiru; Prezdaan,ti Oromiyya Oromummaa isaaf falmachuu yaalu ilee Summin nyachisan biyya bassan dhoksan jiru;
5. Baqatoon Oromoo 115,000 Kenya, Yeman, Somailya, Djibout, Sudan, Egypt, Tunsiya Uganda keessati rakko arga jiru. Human qabaman deporti goodhamni ajeefama jiru;
6. Oromoon 40,000 mana hidha Tigre Kessati rakacha jira;
7. Qabeenya Oromiyaa hundi Kamapani TPLF EFRT fi Mega kkf qabamee dhunfatamee jira;
8. Sheken Ali Alamudiin jeedhamuu fi abootiin qabeenya tokko tokko Oromiya sama yamuu jiran gibra ilee Oromiaf kafaluu hin barbadan; sheki alamudeen, Milyoon 200,000 ol Oromiyaaf hin kafaliin jira, kara birra amoo Galma Abba Gadaan Oromoof ijaraa jeedhe sobe ergam messha barbachisuu Ashura malee galchateee booda Galma Abba Gadaa Oromoo ijaruu diduun isaa Tufii gudaa Oromoof qabuu dha.
9. Mani Barumsaa fi Bufatii fayya, hosptal Oromiyaa keessati akka seera Adunyan ka'eeti akka Tigray keessati ijarama jiruuti Oromiyaaf ijarama hin jiru;
10. lagi Oromia fi Hoor Oromiaa keessa jira hundi xurii qoona Abbaboo fi warsha keessa iti gadii namuun summayee jira, Oromoon xurii fi bishan Kemikalan sumayee dhugee dhumaa jira rakko kana fakkatan 100 oli isiin ibsuu ni danda'ama kanafuu:
1.Yerro sina Habashoon kara amanta Oromoo qabachuuf waan deemanfi movement Amnta adeemsifna jeechuun hojii hojeetama jiru nu dagachisuuf malee uni Oromoo walda Oromooti afaan Oromoon kadhacha jira;
2. Ummani Oromoo mirga dhabee bakka itti wal argge waqa isaa ilee kadhatuu dhabee malee utuu mirga argatee guyya tokkoti waldalee Amanta hundi nama bachuu dadhabee dirre Masqalati kadhachutu dhufa; Oromon haa bilsomuu malee rakko amanta tokko ilee hin jiratuu; Muslim, kirstyan fi waqeefatan Oromoo waltaji tokko irrati afaan Oromoo wal dukka kadhta, furmatii hunda bilisummaa ga'aa.
3. wayeen Amanta, ganda fi habasha jala adeemun atataman dhabachuu qaba, sababin isaa Oromoo Oromummaa isaan dararama jira malee rakko amanta ykn rakko ganda miti.
Erga GPO haara
Qabsoon waggati guyya tokko miti.
Gaafa waa argamee gamaduu, gaafa rakkon dhalatee dafan manati ol baqachuu fi mana chufachuun qabsoo miti. Waggati yeroo tokko walga’ii godhachuun $10 gumachani wagga tokko kana farsuun, gaafa jeequmsii tokko dhalateee amoo malaqa keenya sama turtan jeedhan namoota diree jira irrati duluun qabsa’aa nama hin goodhu.
Qabsoon disapora goocha jiruu, qabsoo keezii ykn waraqaa enyuuma argachuuf malee dhuguma goochan diina itii hadhaftee, biyya abba isaa bilisummaa goonfachisuu miti. Namoon heedun qabsa’aa cimmaa of goodhani waraqaa argachuun nu soba ba’aan dubee isaan yeroo qoratamuu kan diinaf hojeechuu ergamee kan biyya ba’ee kana moo, diinafi hojeeta ture jirnya isaa foyyefachuu barachuuf kan biyya ba’ee , kana moo rakko fi beelii biyyati kan biyya ariitee siyyassa waan jeedhan keezii isaa waliin qooratee mootummati waan himatee sana ala waan beekuu ilee hin qabuu.
Ummata akkasi keessa kan ba’uu dabaleen dhaabba fi dhaabbi dabaloota suniin gegefamuu ilee diaspora dhumma qileensaan rafamuu fi fayyida isaa ari’uu sana fakkatii. Namaala jiru keessa harki 80 -90 rakoo jireenya, rakoo dhunfaa, feedhi dunya argachuu ykn barachuu, ergama diina fudhatee kan biyya ba’eeyti qooduu fi xinxaluun garidha. Kessumman qabsa’oon diiree qabsoo irra biyya ala deeman namoota ala jiran sun huun gulaluun, saca’uun garidha. Diasporan rakko ummataa isaa isaa siirti beekuuf hidhannoo siyyassa cimma qabuu, lammii isaa biyya keessati dararama jiruuf murteesdha , garuu diasporan biyya ala ta’ee dhaabba kalacha ummataa isaa ta’ee tokko diigee, fafacasee dhaabba lammi isaa gabronfachuuf jeedhuu jala hiriruu arguun heeduu nama salfachisa. Dhaabi dhaabilee Oromoo waliin hojeete Oromiyaa bilisoomsuu hin danda’iin diina Oromoo waliin tokko ta’een qabsa’ee Oromiyya bilisoomsaa jeedhuu dhaabba utuu hin tanee walda nnamoota maratan yoo jeedhan wayya. Sabba isaa Oromoo lamii keenya balalrfanee diina wagga 130 harka fi harma nu muree waliin hiriruun siyyssa maratuu yoo hin tanee kan birra ta’uu hin danda’uu.
Diin Oromoo halkan fi guyya aragalfii tokko malee hojeeta. Kanaafu waggati guyya tokko walga’ii goodhachuun ibsaa eejeennoo basuun qabsoo kana achii butaa hin jiruu. Qabsoo kana achii butuuf warii wal amanuuf wareegamaaf qoopha’ee wal barbadee gara qabsoo haqati siiqee halkan fi guyya qabsa’uu, warii waregmaa lubuu hin barbanee amoo afaan isaa qabatee hojii isaa hojeetacha waan malaqa qabuun qabsoo kana tumsuu, kan kan ilee dhadhabee amoo diinf tumsuu dhisee jireenya mata isaa jirachuu fi matii isaa gargaruu. Warii dhugguman qabsoof mana ba’aan qabsa’oon dhugga wal barbaduun ama. Dara fi dakuun wal calala jira, sobi fi dhuggan ifaa ba’aa jira. Warii qabsoof mana ba’aan hundii hala duree tokko malee wal qabatan qabsoo isaan fininsuun human ta’aan ba’uu qabuu. Warii qabsoo dhuggaf mana bate wal qabadhuu diireti asii bayii qabsa’ii?
Oromoon Abba irree Meles Zenawif Obsaa hin qabuu, of irra fonqoolchuun dirqama.
Gabasaa GPO/OPC Konference Oromoo fi Gaanfa Africka Adolessa 2 bara 2011
Konfrence Gummi Paarlamaa Oromoon qoopha’ee irrati xinxala dhiyatan keessa ijoo dubii gagababa:- yakka siirni garbonfata Oromoo irrati geesisu fi yaakamtoon kun murtii isaa argachuu qaban irrati. Dr. Getachew Jigi Demekssa akkasti dhiyeessan;
Lamiin biyoota adda addaa fi uumatni Oromoo baga nagaan dhuftan rakkon keenya rakkoo wallotti mirgi nama Ethiopia keessatti dhiibamuun beeli fi dhukubn Ethiopia keessa jiru fi haali qillensa jijiramun fi laafti samamun namni biyya sana akka baqatu dirqisisama jira. Kun imoo rakoo Uummataa Oromoo qofa utuu hin ta’iin rakkoo uummata Aadunya ta’e jira.
Konfiransii kana kan qophese gumi parlaamaa oromootti, GPOn kan hundefame miseensoota parlaamaa bara 2005 naannoo Oromiyaati filatamanin paarlaamaa Ethiopia keessati yemuu ta’u erga ijaaramne kaafnne parlaamaa biyyatti keessatti mirga Oromoo kabajchisudhaf falmii gurgudaa adeemsisa ture, haa ta’u malee mirga uummata keenya kabajchisun hafee mirga keenya iyuu kabajchisu hin dandeenye haaluma kanaan biyya keessa dhibamne akka banu godhamne.
Eerga biyya keessa banes Uummata keenya sagalee dhabef sagale ta’udhan parlaamaa Europa, komishinii Europa, mootummaa Amerika ,qaamoolee dhabbilee Aadunyatti rakoo Oromoo ibsudhan yakaa TPLF Uummata Oromoo irratti gagesisu hunda raga qabatama walin kenudhan saxillee jira. Deggers mallaqaa fi liqii mootummaa Aadunya irra argamu Uummataa keenya fi kan hin geenyef Oogganoon Wayyannee ofi isaanitiif Banki biyyaa adda addaa kessaa dhoksacha akka jiran ibsineef jira. Nagaa gaanfaa Afrika keessatti fidudhaf Uummatni harka caalaa ta’e Oromoon mirgi isaa kabajamufin murtessaa akkaa ta’e ibsun mirga hirree ofii ofin murtefana akkuma Uummata Yogozilaviyaa Uummata Oromoof kabajamu akka qabu wali hubannoon godhama jira.
Ethiopian Empayera mana hidhaa guda saba fi sabilamin hedduun keessatti hidhaamani jirudha. Mana hidhaa kana kan bulcha jiruimoo maafiyaa nama ajeessu qabeenya Uummataa samu, malamaltuman Uummata xuxee ajeessuu, gartuu dhoksan akka HIV/ AIDS Uummata fixaa jirudha Mootummaa akkasif obsi kam iyuu ta’u hin qabu mootummaan abba irree kuni hataataaman jijjiramu qaba. Gpon Uummataa nuu filate fi deggertoota keenya biyyaa keessa qindeesudhan mootummaa kana jijjiru hojii keenya isaa dursa godhane jira. Mootumman wayyaannee qabsoo keenyati rifatee biyyaa allati ilee ergamtoota Oromoo tokkoo tokkoo fi Habashoota afan Oromoo dubatu bobbasun nuu ballesuf sumii fudhate Hotella keessa demtu ilee gocha kana Aadunyati saxiiludhan badii ishee asi butuudhaf ciimne irraatti hojjecha jira. Abbootin irree badin isaan salphinan waan ta’eef diinaa keenya kan jedhe irraatti waan barbadan dalagu irraa ofi hin qusatan. Unilee isaan caalaa waan beeknuuf gochaa isaan hunda Aadunya gura busudhan bollaa nuu qotan sana keessa akka galan gochun dirqama.
Uummatni Oromoo saboota miliyoona 85nin lakka’aman Ethiopia keessa jiratan keessaa wallaka oli kan ta’e waggoota 130 guutuu qabsoo kan gaggeessa jiru qabsoo sirna Minilikii irraatti gaggeessen uummatni wallakaan Oromoo kan dhume yeroo ta’u , sirna Hayilesilasee keessati immoo tajaajila dhala nama fi malu tokko ilee utuu hin argatin, habashootaf garbaa ta’udhan waan oomishee keessaa harka 75_90% habashootaf kennudhan sirna garbuma fi bara dukkanaa keessa jiracha turera. Bara garboomfata mootumma Tigiree keessa immoo akka dhala namati utuu hin ta’iin akka binnensati adamsamee ajjefama, kumataman mana hidhaa keessati himanaafi murtii tokko malee mana hidhaa keessatti dararama,reebichi fi qormati dhala nama fi hin male irratti gaggeefama walumagalatti Oromoo ajjeessan reefaa isaa warabeessaf laachuun gara jabinii wayyaanneen Oromoo fi qabdu nuti agarsiisa kunimoo qabsoodhaf nuu jabeesse malee nuu hinlafifnne.akka nuu murannoodhan wayyaannee irratti qabsoofnu kan nuu godhesi kana.
Oromoon Afrika keessati Uummata guda bayini isaa miliyoona 50 kan qabuu fi lafti teesumi isaa immoo wallakaa lafa Ethiopia oli ykn 600.000 km2 kan ta’udha. Oromiyan lafe dugdaa Dinagdee biyyattiti; homishaa Ethiopian biyyaa allaati ergitu Bunnii, Meetin, Albudaa addaa fi dhagaa adii, midhan dibbataa (Zayitti) nyataa, Uurgooftuu adda addaa, kuduraa fi muduraa,googaa fi kalleen Oromiyaa irraa dhufa. Galiin biyyaa Ethiopia harki 70% kan galu Oromiyaa irratti. Mallaqaa Oromiyaa irraa argamu kanaan bu’urii misoomma gurgudaa fi investimentii gurgudan kan godhamu garu Tigiray irraatti. Madda galii gurguda kan qaban magaaloon Oromiyaa akka Finfinnee, Haraarf Dirreedawaa wari Tigire galii kana to’achuuf jeecha Oromiyaa irraa kutan ofi isaantti to’achaa jiru.
Gudina Oromiyaa kan sodatu wayyaannen lafa Oromoo qoqodee gara oloota Oromiyaa Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Ogaden fi Uummatoota kibbaati dabalte, kayyoon isaa inni gudan immoo Oromoon oloota isaa kana wajjin bara baran wali-loolaa akka jiratuuf kana malee ofidhuma isheetiifu aangoo isheeti fayyadamte Rayyaa fi Qooboo, Rayyaa fi Azaboo fudhate jirti.
Mootumman Maafiya ta’ee Uummata Oromoo fi Uummtota Ethiopia birros Ajeesa, hiidha fi sama jiru kun Mana murtii Aadunyan ga’uuf Oggesoota Oromoo Ogguma Seera Aadunya qaban fi Oggesoota Seera Aadunya Europan xinxalchisun Namota maqan isaan ibsamee Meles Zenawi, Sebhat Nega, Brihne Gebre-kirstos, Kasu Ilala, Genet Zewude, Abai Teshaye, Abadi Zemo, Siyum Mesfin, Tadesse Haile, G. Samora Yunus, Abi G/Meckel, Shimles kidie, Arkeb Ekubai, Getachew Balay, Azeb Masfin(waif of PM), Mohammed dirir, Prof Endrias Eshete, Addisu Leggess, Tefera walwa, Bereket Simon, Brihne Barehy, yakka duguga sanyi baleesuu Uummata Oromoo fi Uummatoota biro irratti raawwatan kana gadii jiru.
1. Mana murtii Aadunya Hegue akka dhiyatan murtii isaan argatan;
2. Qabeenya isaan, Matii isaan, daldaltoota isaan waliin hidhata qabau hundi akka hidhamuu;
1. Lammi Biyyatti wal caalchisuun adda addauma jirenya garii fi gaddaduma umun;
Gudina jete wayyaannen kan himachaa jirtu gudina biyyaa Tigiray ta’u mala malee nannoo biro keessaa gudin tokko ilee hin jiru. Kana ibsudhaf Oromiyaadhaf Tigiray gidu adda adduma tajaajila Fayyaa, Barnnootta, fi Bajeta jiru ilaalun ni danda’ama:
A. Tajajila Fayyaa wal caalchisuu: istasticsin mootummaa nannoo Oromiyaa fi Tigiray yemuu ilaalu du’i da’imani ijoolee dhalatan 1000 keessa 116 Oromiyaa irra yemu du’ani, Tigiray keessa ijoolee 1000 irra 64tu du’a, ijoollee talaalii argate Oromiyaa keessa harka 10% yemuu ta’u Tigiray keessaa harka 62% , agoborii busaa kan argatan Oromiyaa keessaa 0.3% Tigiray keessa 12.1%. Oogesoota fayyaa uummatafi tajaajila kennan yemuu ilaaluu Oromiyaa keessati Ooggesii 1 namoota 60.835, Tigiray imoo ooggesii 1 namootaa 18.614. kuni akka fakkenyati kan fudhatame male hunda isaa kan ibisu miti. Akka karoora sagantaa Aadunya Ethiopian mallateesiteti gandi qotee bula hundi kellaa fayyaa tokko tokkoo akka qabatu uummatni 25,000 buufata fayyaa sadarka isaa egate tokko akka qabatu, Uummatni 75,000 Hospitala sadarka isaa Eegate akka qabatu seera Uummatni Aadunya ka’e Ethiopian hojji irra olchaa hin jirtu. Yeroo Uummatni tajaajila kana dhabe jiru kana mootumman Tigire Dollara Miliyoona kuma dhibba tokko basun tankii ammayaa Ukireen irraa bitachu isaa ibse jira.
B. Tajajila Barumsa wal caalchisuu; Istatistics oliti ibsamen kan wali fakkatu haalii barumsaa Oromiyaa Ethiopia fi Aadunya keessati sadarka gadi anaa keessa akka jiru beekamadha, hirmanan baratootaa kutaa1-8 Oromiyaan harka 62.8% yemuu ta’u Tigiray harka 97.7% hirmananan bartootaa sadarka 2ffaa 9_12 Oromiyaa keessa harka 11.6% Tigiray keessa immoo harka 44.8%.
Kun kan agarsisu ijooleen Oromoo barumsa jibani utuu hin tanne gandootaa qotee bula Oromoo 7000 ta’an keessaa kan mana barumsa sadarkaa 1ffaa qaban 4000 hin caalaan kunimo seeraa mootumman Ethiopia keewatee seeraa mootumman Aadunya baseen kan walimormuf akka seera kanati gandi hunda mana barumssaa sadarka 1ffaa qabachu akka qabu gandi 8ti imoo mana barumsa sadarka 2ffa tokko qabachuu akka qabu kan murta’e yoo ta’e ilee Oromiyaa keessati kuni hojji irraa olama hin jiru. Kun mirga jirnya Uummata tokko baleesudha.
C. Haala qoodinsa Bajataa fi bu’uura misoommaa wal caalchisuu;
Mootumman TPLF guyyaa hundefame kase hanga ammatti Uummataa Tigray Uummataa isaa kan irra calsisudhan gara garuma gudaa ummudhan nannoo lolaan midhame sababa jedhun wagoota digdama(20) guutuu bu’uura misoomma gurgudaa ijaarsaa dandeetti cicimaa fi investiment murtessa ta’an Tigraytti qofaa akka ijaaraman gocha ture haaluma kanan akka fakkenyati yoo fudhane Tigray keessati Uummata miliyoona shan ta’uuf dirre xiyaarraa sadarka aaduyna shan kara Aanoolee biyyaa Tigray walin ga’an hunda dirirsun, universtii sadarka isaan Eegatan Godina Tigray hunda walin ga’udhan ibsaa fi bishanilee Uummataa walin ga’e jira. Oromiyaan Uummataa Miliyoona shantamaa (50,000,000) qabu garu misoomn Tigray kessati godhame kun tokkolee Oromiyaaf hin godhamne. Qodinsa Bajeeta bara 2006/2007 sabsidin federaalaa Oromiyaa fi kename 3,000,000,000,Tigrayfi imoo 824,000,000 kun Uummaticha yeroo qoqodinu nama Oromiya tokko fi qa. shantama (50.00) nama Tigray tokko fi immo qa. Dhibba shan (500.00) wali-ga’a kun akka sira’ufi bara 2005 yeroo parlaamaa keessa jiru kfine hanga ammatti yoo falmane ilee abban irree mootummaa Tigre fedhii uummataa fi falmii keenya fi gura kene hinbeeku. Mootummaa kana jijjiru alaa falii bira hin jiru kan jenufis kaanaf.
2. Ummataa walti qabani (jimilaan) fixuu;-
a. Filannoo bara 2005 wal qabatee Oromiya keessa bakka adda addatti namoota 400 ol fi Finfnnee keessati namoota 193 fixuu isaatittin;
b. Jalqaba bara 2007 keeesaa Gara Sufi Harargetti namoota 20 walti qabaman ajeefaman reefi isaan warabeessaf akka kenamuu ta’ee mucaan wagaa 14 kan keessati argamtuu;
c. Yeroo yerroon Bara baran Baratoota Oromoo university keessa gurani mana hidhaatti naquun, ajeesu, tourchi goochuun, biyya ari’uun fi jilmaan summmi nyachisuu fakeenyaf Adama Univesity baratoota 1500, Unvesity Arbaminci irra baratoota 500 du’aaf saxiluu isaattin;
d. Ummatoota Sidama, Shako Megengri, Gambela fi Ogaden walti qabadhan fixuu isaati,
e. Dhabbilee seera fi heera biyyatiin hojjetan Miseensota WFDO fi OBK 200,000 hidhaa, hojji dhorkachuun, barumsa dhorkachuun, qoonqoon addabuu du’aaf saxiluu isaan;
3. Hidhaa fi Tourchi mana hidhaatii lammi fixuu isaatiin: Himata mana murtii malee, akasumasi murtii mana seera malee Oromoo 40,000 wagoota 20 mana hidhaa keessatti dararuun, tourchi ykn reebicha seera Aadunyan dorkamee Oromoo irratti rawwachuun isaan keessa:- qaamaa dubartoota Oromoo keessatti qaruuraa cacabsun, gadamessa dubartii Oromoo sibilaa dimessan gubun, qaamaa dhiraa kollasuun akka inni ilmoo hin godhan gochun, qaamaa dhiraatti qaruuraa fi dhagaa itti hidhudhan darraruun, baratoota durba Oromoo harmaa isaan irraa qophee looltuttin irraa dhabachuun dararruun, Oromoon haala kanan qama hiratan lubun kan jiran biyya keessa, Kenya, Sudan, Germany, Norway, Suwedn , Canada kkf raggaf dhiyeesu ni dandeenya.
4. Humna warrana biyyati lami Tigray irra qoofa goochuun: bakka hundati boobasuun lammin Oromoo fi limmin saba cunqurfamtoota hunda ajjessa fi soodachisuun mirga bilisan jirachuu molqee jira; Uummani biyya isaa keessati akka binensatti warraana TPLF kan sodacha biyya baqacha jirachuu waan itti fufu danda’uu waan hin taneef;
5. Melese Zenawi fi gartuun isaa maqan isaan caqasamee minsteron isaa hundi Mallaqa gargarsan Eurrpea fi USA samuu isaan: kana irra darbee homisha biyyatti irra alatti kan gurguramuu hunda bank mata isaatti biya alatti akka galuu goodni jiru waggota 4 darban qofa Ethiopia keessa mallaqi seeran ala ba’ee Bilion 8.4 rah-gga UN irra dhiyatee yamuu ta’uu wagoota 20 darban keessa Bilion 40 ol samamuu akka hin olee accounti bank jara kana irra hunbachuun ni danda’ama.
6. Uummata Oromoo feedhi isaa malee bakka jirenya isaa irra buqisuu fi haala jirenyaf hin mijanee keessa qubachisun qoonqoo fi binensan akka dhuman goodhe jira;
7. Sabaf sabilamii waltti busuun akkasumas saba akka Oromoo gargari qoodee walti naquun, Amantan gargari qoodee walti naqudhan lubuu kumatama ficisisun yeroo bulchiinsa isaa ittin dherefachuuf itti fayadamee jira, lola Uummataa gidutti TPLF ummee keessa Oromof Somalee Mesio hararge fi Moyalee Kenya, Oromoo fi Afar, Oromoo fi Uummatoota kiba, Oromoof Gumuzi, Oromoof Oromoo giduuti Borna fi Gujji, Borana fi Gabra, Gujii fi Gabra, Amanta amoo Jimmaa Iluabbabora, Wallagaa lixaa fi Kofalee keessatti lubun kumatamaa mootumma kanan akka baduu goodhamee akka nu qoratamuuf gaafana;
8. Mirga demokrasuma Uummataa molquun: namni Party TPLF hin deggree xa’oo, lafa qoona, sanyi filatama fi liqaa motummaa akka hin arganee goochuun jarasa fi ijoolee dabalatee namoon Miiliyoona 10 ol beelaaf akka saxilaman goochuun lubun kumatamii akka darbuu goodhamee jira;
9. Sababoota lakoofsa 1 keessatti caqasamee Uummataa lamin qooduun tajajjila fayaa akka hin arganee gochuun: jeequmsaa adda Uummun, lafa dhorkachuun beelaf akka saxilamuu goodhe jira fakeenya Parlaamaa Ethiopia keessatti utuu hin hafin dhukuba Goiter Dubartoota Oromoo miliyoona 3_4 ga’aan akka tajajjili fayyaa atataman keenamuu bara 2005 keessa gaafanee mootuumman Aadnya UN dhimma kana qooratee dhiyeese mootumman Ethiopia furmata tokko keenuuf dhisuun ijoolee durba fi dubartoon dararama jiru;
10. Baqatoota Oromoo biyya alaatti adamsuu: namoota ragga enyumma UNHCR qaban dabalatee ajeesuu, ukamsee fudhee biyyati geesuu karatti ajeesuu, Mana baqatoota gubuun Uummata nagaa fi dha’iman fixuu fakenya Feberwary 5 bara 2008 Puntland Basasoo Somalia keessatti yeroo tokkotti baqoota 65 ajjesuu, 100 madeesuu fi mana 250 gubuun isaa; Baqatoota Oromoo Kenya fi Djibouti irra humnan ukamsee biyyati geese du’aan addabuu isaattin;
11. Uummataa Oromoo lafa isaa irra buqisuun lafa isaa gurgurachuu: Lafa Oromoo seera fi heera tokko malee Oromia kessaa hektaraa 2,319,214 fi Finfinne kessaa hektaraa 500,020 waluma galatti hektaraa 2,819, 234 hanga 2010 gurguramee jira, lafa kana irra namoon bu’qaan beenya tokko malee, bakka jirenya tokko malee, da’iman isaan bakka itti baratan fi ti jiratan tokko utuu hin argatin akka buqa’an goochuun sanyin Oromoo akka baduu goodhama jira.
12. Nannoo Finfinne hundanu km 200 naaneese lafa abbaboo qootan akka ta’uu goochuun: tessoon kun amoo lafa ol ka’aa fi bishan biyyaatti hundi kan burquu asii utuu ta’uun isaa beekamuu kemikalii Aadnya irratti dhorkaman Ababoo kana fi lafa kanatti akka naqamuu hayamuun, xuriin kemikala kana fi warshalee adda adda bishan laga aqaqii, Mojoo, Awash, Qooqa, Zuway, Langanoo kkf akka baleesuu tasisun Uummatti Oromoo harki 97 bishan lagaa dhuge jiratruu rakko bishan fi dhukban akaa dhumuu gochuu isaanf;
13. Ta’ee jeedhamee itti yadamuun Bosoon Oromiyya akka gubamuu goochuun Baratoota Abida bosona Oromiyaa dhamsuu yaalan hundinu reebichan akka du’aan goodhamuun isaa Mootumman kun qabneeya Oromoo utuu hin hafin akka baduu lamin Oromoo ilee akka dhabamuu ta’ee jeedhe yakka dalaguu isaattin gaafatamuu qabuu;
14. Mootuuman wayyanee loltoota dhukuba HIV/AIDS qaban naannoo Oromiyaa keessa beeka boobasuun dubartoota qabsa’oota Oromootti siqan, fi ijoole durba mana barnoota fi badiyaa keessa jiran dirqisisan gudeedun dhukba kana qabasisa juru; kun amoo yaaka hunda caaluu waan ta’eef namoon kana akka rawwatamuu goodhan addabamuu qabu;
Uummaan Oromoo Abba biyya Ethiopia ta’uun nagga tasgabii Gaanfa Afrika keessatti Uumuuf murteessa waan ta’eef hanga biyaa isaa garbonfata irra deefatee nagga fi tasgabii Gaanfa Afrika keessatti dhabbutti qabsoo isaa yoom ilee hin dhabuu;
Uumman Oromoo rakko isaa irra ga’aa ture waggota 130 dabarsee irra waan heedu baratee jira, rakko isaa irra ga’ee kana lammi Ethiopia kami irra ilee akka deebi’ee ga’uu hin hayamuu sirrni abba irree ilee lamafaa akka Ganafa Afrika keessa jiratuu hin hayamuu, extrimsteleelistoota amantaa fi sanyi fuula kamin ilyuu malamaltumma(cooruption) Ethiopia keessa TPLF walin akka dhabamuu goochuu. Uummani harka gudessa (majoriity) wagoota 130 ol salphina keessa jiratee gabruma bayee abbaa biyya fi human murteessa biyya Aricka ni ta’aa. Kana goochuuf amoo hayyama eenyuu irra ilee hin gaafanuu, waregama lubu keenyan yoo ta’ee malee. Qabsoon Oromoo hanga ama kan qancaree fi kan bacancaree yaaka ergamtoon diina Oromoo keessati rawwatan ta’uun beekamadha. Ergamtoon diina kun Oromoo, lamii Oroma afaan keenya beekan, Oromoon wara Habasha irra dhalchee makoo of keessa qabuu, eenyuusta’ee eenyuu gantoon diinaf hojeetan addabii dhiina irrati fudhanuu caala fudhachuu qabna, kun Oromoo lammi isaa ganee deeinaf akka hin hojeene barumsa ta’aa. Kessumati nami biyya ala jiru Oromoo ofiin jeedhuu kun rakko Oromoo himatee waraqaa itti argachuuf malee harki caalaan Oromoo miti, jarani kun amoo maqa soba sun fayadamani dhaabbilee Oromoo keessa galani jiruu, hoji bassasaf namoota wayaneen ergitee dabalatee qabsa’oota Oromoo fakkatani qabsoo kessa mili naqatan jiruu, qabsa’aa fakkachuuf waan hunda ni dalagauu, harka lafa jalan amoo Embassy fi wara Embassy jala kurkurtuu waliin kurkuruu qabsoon wara kana irra of qulquleesuu qaba. Oromoo biyya keessa ilee yerro dheeraaf halkan guyya soba wayyanen tii odeesistu qoofa dhaga’uu irra kan ka’ee namoon bayeein isaani soba barani soba TPLF fudhatee of sobuu egalee jira. Kanaafu Wayyanee fi ergamtoota ishee soba isaan saxiluun dhugga jiru ummataa kana hunachisa adeemuun murtesadha. Yaakaa isaan dalaganfi Malaqa Ethiopia isaan biyya ala dhoksaa jira hunda adnyaf ni saxila. Yero sana dandeeti keenya fi haqa keenya goocha isaan waliin madaluu danda'uu.
Hara ykn Borii jeechuu banuus dhiyooti ummani kun Bilisumma isaa ni goonfata Ergamtoon wayyanee fi Wayyanen saba durati ba’aan murtii isaa isa dhumaa ni fudhatuu, warii haqatii cichee hanga dhummati diina dura dhabatee qoofatuu Bilisumma sana dhandhamachuu qaba.
Xinxala 2fa kan dhiyeessan addee (Ms) Tetty rooze Ittigafatamtuu Centera Protestant Antwerpen fi Falmatuu mirga dhala nama, yamuu tatuu rakko Oromoo biyya Ethiopia fi baya alati ilee dararama Oromoon arga jiruu tokko tokkon dhiyeesun walga’ii kana dinqisftee jirti; Rakko Oromoo nami hundi biyyi hundu dhugga jiru akka hubantan goochuun conference kana walfakata sadarka adda adaati bakka hundati qoophesun mootummuni biyya hunda akka hubatan goochuun dirqama keenya jeedhan.
Dr. Trvoer Trueman nama 3faa dubatan yamuu ta’uu rakko baqatoota Oromoo keesumatuu Kenya Kamp Dadahan, kakuma fi Nairbob jira irrati tooko tokko namoota hasofsisan maqa dha’uun rakko isaan dhiyeessan jiru, kitaba rakko Baqatoota Oromoo Kenya kana irrati qoophessan ilee hirmatoota Konfrence kanaf keenan jiru; Ummnan Adnyna Baqatoota Oromoo gabra India fi Medertranya keessati naman dhumma jiran kana mali rakkatan akkasi balati deemu lata jeedhe yaaduu dhisun isaan nama gadisisa jeedhan. Nami utuu hin rakkatiin biyya isaa, matii isaa fi jirenya isaa dhisee rakko gudda kana keessa hin seenu ture, kun kan argisisu Ethiopia kara hunda iyuu mirga Oromoo dhibudhan Oromoo abdii kutatee biyya sana akka baqatuu goocha jirti kun amoo beekamuu qaba jeedha.
Mr. Andrew Swan from UNPO presented on International Recognition of the Oromo Nation and its Current Situation xinxala jeedhu irrati mirgi Oromoo gaanfa Afrka keessati kabajamuun waanma filataa birra qabu miti jeedhan jiru. Oromoon Milyona 50 harka Tigrota Milyona 5 jala acucamee akka jijratee seer kami iyuu hin degeruu, Oromoo Abbaa biyya gaanga Afrkia waan ta’ee ummata kana ala qabuun siyssi hojeetamuu kami iyuu jirachuu hin danda’uu kanaafu furmata atatyama barbadamuuf qaba jeedhan,.
Hayyuu Qorata samicha lafa Oromoo Jino Brunswijck jeedha amoo samaicha lafa Oromiyya fi balaa hama ini of duba qabuu irrati qooranno bala dhioyeessan jiru; lafa Oromoo kun gurgurtan isaa waan hundan seeran ala: gatiinittin gugrguratee heedu xiqadha ykn tola jeechuu dandeenya, namoon seeran ala hunman qee isaan irra buqifamaf beenyan hin kafalamnee, ijooleen isaa gara fula duratii mal akka ta’aan mootummaan homa hin yaneef, hoji ilee yoo qaxaraman kafaltiinisaan keenamuu guyyati 0.50 $ gadii kun matii isaan jirachisuu hindanda’uu; Mootumman lafa keene sana investeroon akka kununisanf dirqama waan ka’ee hin jiru, waluma galati lafi gurgurtan Ethiopia keessati namoon hirmatan hin gugureesi hin biitess gaaf tokko itti gafatamuun hin oluu waan hundi isaa seeran ala waan tayeef jeedhan;
Maire Sandra qooratuun dhimmaa Oromoo Univesity Lueven irra dhiyyatee akka ibstuti umman Oromoo keesummati dhaiman fi dubartoon rakko gudda irra jiru jeete jirtii; biyya isaan keessati tajajila faya dhabuu, barumsaa dhabuu, bishan dhuggan fi minan nyatan dhabuun biyya hoola fi akkasumas adunya irra facafuu dirqaman jiru. Umataa kana atataman degersii adnya goodhamuuf bana rakko booda dhufuu rakko Oromoo qoofa utuu hin tane rakko adunya hunda ta’uu mal jeete jirti.
Mr. Franc Rottiers, Philosopher and a Doctoral researcher at Ghent University with a title Democracy revisited: recognizing the case of Oromo refugee. Biyya Ethiopia Keessati democracy dhuggan dhufee ummani majority ta’ee Oromoon mirgi isaa egamuu banan wayee Ethiopia waan dubatamuu hin jiru jeedhan, Demokrasin dugga mirga hunda egsisuu danda’uutuu nageenya Ethiopiaf fiduu danda’a; kun amoo biyyati beela, gadadummaa fi kadha keessa akka batuu gargara.
Dargagoo qoratan Univesity Gent irra dhiyatee Mr. Remco Van Hauwermeiren presented The Human Right Abuse of the Ethiopian Government in Ogaden; qoora diireti biyya keenya deemuun rakko Ogaden qooratee irrati hundaun rakko ummataa Oromoon wal fakata ta’uu isaa ibsuun waan ijan argee fi gara jabina mootummaa Ethiopia lammi biyya sana irrati adeemsiftuu sukanesadha jeechuungada isaa ibsee jira.
Xumura Irrati Mr. Gabriel from the Aram-Nahrin Organization presented on Indigenous nation’s colonialism, spiritual and physical genocide.
Barumsa fi xinxala gudda kan dhiyeessan yamuu ta’uu ummaani Oromoo qabsoo isaa bakka ga’uuf mali akka goochuu qabuu tokko tokko gorsaa gudda keenan jiru. Kana booda gaafilee Mana keessa dhiyyateef deebin kamaee jira. Wayee saganta Kofrernce Oromoo fi Gaanfa Afrika jeedha kana irrati namoon yaada isaan keenacha turan. Konfrence kun adda kun amoo namoon lammin Oromoo hin tanee kun hundi wayee Oromoo hunbannoo akkasi fidee dhufee namoota lammii Oromoo ta’aan barsisun injifannoo gudha ta’uu isaa ijan argnee jeedhan.
Emabsyiin wayyanee Oromoota tokko tokko malaqan bitatee konference kana hin deemIna jeet yoo hambftee ilee, yoo deemtan rakko keessa galtuu utuu jeedhan wari Embassy bilbilan wawatan Oromoo warii qulquluun fi Embassy Tigreti harka hin latiin hoji isaan boonsa hojeechun xumurtan jiru.
Oromiyaan ni Bilisoomiiti !!!
Wayyanee biyya keenya irra ni fonqolchuna !!!
Gummii Paarlamaa Oromoo, Oromo Parliamentarian Council (OPC)
Tel. +32 (0) 3 218 80 43 Fax: +32 (0) 3 218 61 73 GSM +32(0) 488 47 93 60
TPLF Mafia lammi biya kessa samee fixee diaspora samuuf walala goyomsuuf yala jira
Wayyannen wagga 20 gutuu yakka ummata keenya irrati dalaga jiruu:-
· Wayyanee lammi Oromoo kumatama diiga dhangalaftee; 40,000 mana hidhatii darara jirtu, kan biyya aritee jirtuu;
· Wayyanee Baaratoota Oromoo 1000 ol MAIKALAWITI darara jirtuu;
· Wayyanee Barartoota Oromoo Mizan Tepi, Arbaminci, Haro-maya, Wellaga; Jimmaa fi Hawassa univesity keessati barumsa irra qabdee reebicha, hidha fi qoonqoon dorsisaa jirtuu, kun ishee hanqatee, Baratoota Oromoo 1,500 Univesity Adamaa fi Baratota Arbaminci 500 summi nyachiftee;
· Wayyanee Qotatee bula Oromoo lafa isaa irra buqiftee lafa Oromoo biyoota Chaina, India, biyoota araba, Djibuti, Negeria kkf gurguratee;
· Wayyanee Lafa Oromoo Homisha Xafiin Beekame Finfinnee Marsee jiruu hunda humnan qootee bula keenya irra futee qoonnaa Ababoon lafa keenya kemikalan baleeesuu irra dabartee ijoolee durbaa hoji kana irra bobo’aan kemikala biyya adunya kana irrati dorkamee qooni abbabboo kun fayadamuun lubuu isaan fixaa jirtuu;
· Wayyanee xurii warasha seeran ala bishan Oromiyati gadii naqtee Hora fi Bishan Oromiaa gutuuma xurii warshan baleessa jirtuu;
· Wayyanee dhukubaa dadarba fi HIV/AIDS akka meshaa waranati fayadamtee ummataa keenya fixaa jirtuu;
· Wayyanee Baqatoota keenya biyoota Kenya Yeman, Somalia, Djibuti, Sudan kessati ajeessa jirtu, kan humana qabdee biyyati geesitee ajeessa jirtuu;
· Wayyanee Homisha Oromiya hunda of to’atee humnan samtee biya alatii gurgurachaa jirtuu;
· Wayyanee waggota 4 kessati Dolara Billona 8,5 biyya kesssa bajeeta ummata samtee biya ala dhofatee;
· Wayyanee lamii keenya dukana keessa utuu jiruu Ibsa biyyati Djibuti, Kenya, Sudan fi Egypteti gurguratuu lammii biyyati hunda kan tufatee Wayyaneen
Ummata keenya irrati daba akkasii Mafia- TPLF hojeeta jiru Abay jaliseen ibsaa isiin keena yamuu jeedhuu nami aman yoo jiratee nama samuun dhukubsatuu qoofa.
Ammo Dispora ala jiru Malaqa na keena; na tumsa fi na deegera jeechuun iyacha jirti, Utuu yaaka heeduu lamii keenya irrati rawwatuu fi qabnya biyya keenya samtee Bank biya ala dofatuu TPLF tumsuu fi malaqa keenufiin lamii Of irrati du’aa murtessuu akka ta’ee hundi beekuu qaba.
Kanaafu wamicha wayyanee Brusselsti wama jirtuu kana lammiin Oromoo bakka jirtan akka balalefatan isiin dhamna. .
Oromiyaan ni Bilisoomtii!!
Gummi Paarlamaa Oromoo Chairman, Oromo Parliamentarian Council (OPC)
Gutuu isaa asi irra dubsa
Date 25th of April 2011, Antwerpen, Belgium
His Excellency Mr. Ban K-Moon
USA House of Representative Offices
Subject: Gross violation Human Right in Ethiopia
An estimated 1000 students from Universities all over the country are currently suffering in secret prisons and the notorious Ma’ekelawi prison in Addis Ababa. What is more either military personnel’s or secret state securities were lined up in many universities specially in Mizan-Tepi University , Jimma University, Haromaya University, Arbaminch University, Wollega University and Addis Ababa University. What is really appealing is, the Oromo students are targeted just only because of their identity and many of them were apprehended for a simple reason that they tuned up to one or the other media outlets. It is to be remembered that Prime Minister Meles have openly admitted of jamming international media outlets including VOA. Moreover they have blocked countless internet sites sand Medias.
Currently more than 200 members of the legal registered Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) And Oromo People’s Congress (OPC) party are also imprisoned and are still suffering without any legal grounds. This group includes Lawyers, Teachers, Farmers, Bankers, Women’s, High School Students and many other different personalities. According to the Ex President of the Current government, Dr. Negaso Gidada, who resigned later for the alleged unconstitutional way of Meles Zenawi leadership and the governments’ gross human right violation; there more than 25,000 cases of Oromo political prisoners related charges of being Oromo Liberation Front (OLF) conspirators.
We urgently appeal to the international community to redress the gross violation of human right and the injustice being committed by the minority regime in Ethiopia. We kindly ask for the implementation of all the necessary measures to bring the Ethiopian regime to terms of rule of law and democratic freedoms.
Chairman, Oromo Parliamentarian Council (OPC)
To. EU commission;
TO. Barak Obama President America
TO , USA congresses members
To. EU parliament members
Subject ; Jeequmssa tokko melee baratoota kan hidhamuun
April Jalqaba kasse Jeequmsaa tokko malee badiisin duguga sanyi ummata Oromoo irrati rawwatama jirachuu isaa Motummota fi Miseensoota Parlama Europea fu USA iyachun dirqama nuti ta’ee jira. Baratoon Oromo 1000 lakkawaman Baroota irra fudhaman Makalawi keesssati tourtchi goodhama jiru. Oromoo ta’uu isaan qoofan Univesitu hunda keessatu Mizan-Tepi, Jimmaa, Haromaya, Arbaminchi, Wellega , Finfinne university fi kan birro keessa human Warana guddan Mora keessa galuun Baratoota Oromoo qoofa sanyiin adda bassan darara jiru. Baratoon Oromoo Redio, TV, Bilbila fi Internet yoo fayadaman gaaf tokko malee qabamn hidhama jiru. Kanuman walqabatee Oromiya fi Univesity biyyati hunda keessati Mobail, Redio fi Internet cufamee jira.
Miseensoon Party Mormitoota Oromoo OFDM & OPC misensoota parliama dabalatee nami 200 ol soban hidhaman jiru. Umman Oromoo gutuuan yaakka tokko malee jeeqama (terrorazed) goodhama jira. Daldaltoon fi Hojeetan Mootummaa sababa mamamatumma jeedhuun mana hidhatii gurama jira. Garuu Malamaltumman adynua kana irra Melese Zenawi kan caaluu hin jiru. Walumagalati Oromoo ta’aan dhalachuun addabii walgala (comman punshiment) irrati rawwachuun yaaka duguga sanyituu irrati rawatama jira.
Motumman Ethiopia Atataman yaaka hojeetama jiru kan dhabbbun furmata hin keenuuu tana mootumman Adunya tarkanfi kana gadii akka fudhatuu gafatamee jira:
Ethiopia irra uggurra walgala gutuu akka irra ka’amuu;
Univesity adnya hundi Ethiopia Uinvesty irraa qunamti kamii iyuu akka dhaban,
Baratoota Oromo 4 lubu akka baduu gochuun, 80 ol waraqa barumsaa Certoifcate dhorkachuun, heedu amoo hidhuuf dararaun biyya akka ba’aan kan godhee Uinvesityn Meqale Certifcate, Diploma fi digiriin in keenuu Beekamiti akka hin arganee fi Univesity adunya qunammti irra dhabuun addaba enyumma akka argatuu goochuu;
Ooganoon Ethiopia gutuun biyya kami iyuu akka hin seene VISA akka dorkataman ;
Melese Zenawi Minsteroon isaa fi isaan waliin qunammiti wari qaban namoon dhunfa fi dhaabbilee daldala dabalatee Bank Account isaan akka frize ta’uu;
Hanga ammati Oromoo du’aan fi soban hidhaman dararama jiran dhimmi isaa atataman IHC dhiyeetee, Mootumma Melese Zenawi irrati himanani fixinsa sanyii akka banamuu;
Seeran ala lammi Ethiopia lafa irra buqisee biyoota alat lafa mootummaan Ethiopia gurguratee hundi seena ala ta’uu beekamee ummataaf akka deebbiyuu,
Ajeecha, Hidha fi Darara Ethiopiati irra ga’uu baqatan biyya Holaa keessati rakkacha kan jiran Lammiin Oromoo hundi Beekamti adunyaa argatan deegeersi kunnunsi akka goodhamuuf;
Biyyyon Holaa Ethiopia jiran hundi baqatoota Oromo qaban biyya Ethiopiati hunman deebisuuu dhabani, Baqatoota Oromoo kununsaa fi degersa seera adunyan qaban akka argatan;
Bilisummaa Oromoof dhaabilee falmacha jira, rakko ummatticha irra iffati ga’aa jiru bu’uura goodhachuun degersi waan hunda mootummata hunda irra akka isaan goodhamuu;
Tessoo Mootummota Afrika fi Teesoo qamoolee Mootummota Gamtoman Afrika kan ta’ee Oromiyyan garuu ummani ishee ama ilee bilisumma kan hin argatiin jiru, Mootumman Oromiyya UN beekamti argatee Miseensoota Mootummota Gamtoman ta’uun Ummatii Oromo Miliyoon 50 ol Nagga fi tasagabi biyya isaati akka argatuu isiin Gafaana;
Oromiya Keessati nami Hoolaa Ayyanaaf qalalee Googga Hoolaa ABAYif jaalisuuf akka gumachuu, Leestroo qoophee haxooftuu kassee baratan mana barummassa jiru utuu hin haafiin Abay dampf malaqa akka bassan goochuun TPLF malaqa ummataa guratee baduuf deema jirti. Ummaani keenya waan beekuu qabu TPLF malaqa kana fudhatee baduuf malee jaaliisii Abayf akka hin tanee iffaati beekuu qaba. Ummaani lafi isaa harka fudhamee India, Chaina fi Arabatii gurguramee, ummaanii ijooleen isaa 1000 maikalawiiti guramtee dararama jirtuu, malaqa isaa kishaa isaa keessa basee Wayyanne (TPLF) f keenuun walaluma gudhadha, ummataa kana damaqisuuf barsisuu qabna. Namii fayyaan malaqa isaa diina isaaf keenuu hin qabuu.
Ummani Oromoo yoo meesha harka dhabee abida harka qabuun , gatii ijoolee maikalawiti dararama jirtuu qabeenya diina, mana diina, qoona diina abida itti sararan deebi lachuudha.
Yeroo hunda diini nu hidhee, nu ajeese, nu midhee, nu dararee jeene dubachuu ama gadhee ta'ee jira. Erga hidhamuun dararamuun hin olee tolaa dararamuu irra, waan diini qabuu huna barbadeessan dararamuu ykn du'uu barbachisaa. Oromoo utuu waan tokko hin goodhi, hidhama, qabama diina ola isaa jiruu irrati tarkanfi fudhatee hidhamu malee toluumaa harka wayyane galan dararamuun siirii miti. Edit Settings
Orignal Oromoo Revolutionary Front for Freedom of Oromia
Oromoon Bilisummaa qoofa feedha, Dhaaloon ama kun dhaalotaa bilisummaan jirachuu feedhuu, biyya isaa Oromiyya irraati abbaa ta’uu feedha, Afaan isaa Oromoon biyyati keessati bakka hundati fayyadamuu feedha. Lamafaa Paarlamaan Afaan Oromoo hin dubanee hin jiratuu, Finninee haqa Oromiyyati malee meeshaa diina hin taat’uu. Baratoon Oromoo biyyaa isaan keessati akka bineensaa addamsammuun ni xumrama.
Waarii qaamaa ormataa intalaa Oromoo keessati qaruurraa cacabssan murtiif ni dhiyyatuu;
Waarii sibbilaa diimeessan qaamaa Oromtaa hadhaa keenya gubban dhiifamii hin goodhamuuf;
Bara baraan Baratoon Oromoo University keeessa ari’amuun ni dhaabataa;
Lafi Oromoo seerani ala samamee gurguramee Oromoof ni deebiyya:
Bishan fi biyeen Oromoo summa’ee ni qulqula’aa;
Oromiyyaf Baajeeta Tigray gadii akka kadhatuu keenamuun ni dhaabataa;
Tigigreen hundi Generalaa tatee Oromoo loltuu qoofa ta’uun ni haafaa;
Qabeenya Oromoo harka minsteroota TPLF jiruu ni deebiyaa;
Oromoon biyya isaa Irrati Minsteeraa, Ambassadaraa, kommishineera ta’uuf Tigree jalaa deemuun ni haaftii;
Baqataan Oromoo Kenya, Somalia, Djibuutii, Sudan fi Yementi dararamuun hafee biyya isaanti ni galuu.
Kanaafu Oromoo ka’ii, Ganda kee to’aadhuu, Garee fi gooxii, Waraan fi Polisiin Oromoo Ogani OPDO hundi lammii kee birra dhabadhuu falmadhuu TPLFfi hin falmiin.
Dhaabbileen siyyassa Bilisummaa Oromoof falmatan waan dandeessan hundan ummataa keenya irrati falmachuun hara, bori yeerron hin jiruu.
Ummani Oromoo biyya keessa waan goochuu qabuu:-
1. Diina hoolaa isaa jiruu hunda adda bafatee beekuu qaba;
2. Soochi diina adda bafatee hordoofu, bakka waraana fi meesha waraana, bakka qabeenyan TPLF jiru hunda beekuu qaba;
3. Wayee waraqisa tokko fi tokko ta’ee mariachuu qaba;
4. Diina irra bituu fi itti gurguruu ama kasee dhisuu qaba, hotela, man yaala, mana barumsaa suqii diina lixuu lagachuu qaba.
5. Wamichaa diina, duga’ii diina, mana isaan ga’uun fi qunammti kami iyuu dhisuu qaba;
5. Walga’ii TPLF; marii fi qunamti dhisuu qaba, diina harka qabuu lagachuu qaba;
6. Midhan nyata fi qabeenya isaa iti gurguru dhisuu qaba kkf
7. Media ala darbuu fi ibssa hordoofuu qaba;
8. Baratoota Oromoo bakka hundati waraana TPLF fi ijoolee Tigrayn biyya isaan keessati rebbama, dorsifama, fi hidhama jira ummani keenya caalisee ilaaluu hin qabu;
9. Bala Barata Oromoo tokko irra ga’eef ergamtootaa diina irrati tarkanfii laaleessa fudhachuun haaloo ba’uu qaba.
10. Qabeenya wara TPLF Oromiyya irra samame hundi gutummaa Oromiya keessa jiru gubamuu qaba, konkolatan isaan bakka ga’ee hundati gubamuu qaba.
Disporan Oromoo waan goochuu qabu:-
1. Malqa, yerro fi humna isaa waraqisa fi qabsoo Oromoof of qusannoo tokko malee gumachuu qaba;
2. Maatii isaa biyya keessa jiran yoo xinnatee mobail interneta fi facebook harkisan pin kode biyya ala qabu kan TPLF hin cufnee galchuu qaba;
3. Biyya biyya jiruti wal ga’ii atatama ta’ee siyyassa biyyati xinxaluu fi qabsoo degeruuf murteefachuu qabu;
4. Media kami irrati Oromoo balaleefachuu fi kommi dhisee diina saxiluu fi sochii diina hordofee gabasuu qabuu;
5. Media maqa Oromoon qabsa’oota fi saboontoota Oromoo xuressan saxilan cufsisuu qabu;
6. Sochii biyya keessa kara fira isaan hordoofan wara dhimmi isaa ilaaluuf gabasuu qabu;
7. Amantaa fi lagan wal qooduun goocha diina waan ta’ee Oromoo hundi wal cunaa dhabatee lammi isaa dararama keessa basuu qaba
Nuuf Oromoon tokko wara Bilisummaa Oromoo qoofa feenuuf;
Oromoon mirga dhaloota keenamee dhabbee angoo Habasha irra argatee mirga isaa qoofa kabachisuu deemuu Oromoo hin jeedhamuu. Warii garuun Waraqisaan Bilisummaa Oromoo labsuuf deemuu sa’aa 24 dokkisa wal qunamuu, kodiin walti dubachuu hojeechuu qabuu, Miseensoon GPO +WFDO + ABO + OPDO+OBK +ULFO =Oromoo maliif Ogana hin dabalanee kan jeetan nu amma wayee dhabba cinqamaa hin jiru, waraqisaa ka'uu keessati Oromoon hund wal birra goora kan jeedhuu akkeeka jira, Miseensoon OPDO akka warana Egypt damaqatii dhaabbilee Oromoo Bilisummaaf falmatan birra dhaabadha firuumman Tigre isiin hin basuu Tigren biyya isaanti galuuf meeshaa isaan xaxacha jirachuu isaan waan beeknuuf; Kanaafu Miseensoota OPDO 3, 500,000 ta'uu kana isiin hin barbabuun dhaabbilee habasha mofa sun barbana jeechuun of fanisuu jeechuudha. Sabbab isaa jari kayoon ishee tokko insi Oromoo nyachudha, diini yerro nu irrati wal jijiru yoo simanee nu nama miti. Kanaafu lammin jibibsa wal irra dissaa deemuu, baratoon keesumati ifaati walti mariachuu ni danda'uu nu tokko diini keenya amoo tokko. Gartuu Bilisumma jeechuun wara Oromiyyan Bilisoomuu ykn Abbaa biyya sana ta'uu qabdi jeedhuu qoofa, miseensa dhaabba kamii ilee yoo ta'ee Bilisummati amanee waraqisaati yoo amanee gartuu waraqisaa -Bilisummaa-Walabummaa Oromiyyaat.
Dhaabileen Oromoo biyya keessa Halaga jala deemuu dhisaati lamii keessan keessa makadhati ganda, aannaa, zoni, Oromiyya gutuu bilisoomsuuf hojeechaa jira; WFDOn Mederak keessa akka ba'uu diraqami wagga dura iti latamee, Miseensii WFDO tokko ilee Mederk keessa hin jiru; Meles Zenawi WFDO baleesuuf lola dura isaa irrat bananun isaa nama gorssa hin qabnee fi nama gorssaa hin dhageenye isaa tassisa. Miseensoon WFDO wagoota 5 gutuu hidhamaa jiran kun lammii Ethiopia kami irratuu yakka tokko ilee wara hin dalagiin, hidhamuun jara kana amoo Oromoo caalaati jabessa malee hin lafisuuu, WFDOn dhaabbilee biyya Ethiopia hunda dura irra itti dulalmun TPLF fira fi diina ishee ilee tora keesse enyuu enyuu jeetee xinxaluu kan hin beeknee hoji sa’aa maratuun yaaftee kan hojeecha jirtudha.
Erga koo wara biyya ala teesee ganda fi amantan Oromoo qoodhuu na dabarsa
Jalaneesi jibineesi Oromoon tokko, Amantan nu keenamee kan ergisaati, Maqan Ganda ittin wal qoodnus kan nu qooqoode Habasha dha, akka nu laga fi amantan wal qooqooduun ilee kayyoo Habashan itti nu bituuf lafa keenyatee, Oromoon wal tufachuun ilee adda Hab...asha fi goocha Habashan nu irrati rawwacha ture, bitamtoon maqa Oromoon daldaltuu maqa Oromoota dhugga baleesuuf mana mana isheeti Website Habasha (TPLF fiAmhari) malaqa itti keenaniin Oromoo maqa Xuresuu hojii goodhete biyya USA fi Europa keessa Gantooni Mandheefat. Oromoon jalee Habasha tatan wari Tigree fi Amhara ergamtan Dhaabbilee Oromoo diiguuf yaaltan fi maqa qabsa'oota Oromoo xureeesuf yaaltan yerroon keessa dhumatee jira. Gartuun Bilisummaa Oromiyya deemmaa jira, Oromoo ijoolee isaa dhugga beekatee biyyaa isaa Oromiyya dhunfachuuf murteefateera.
Bilisummaa dha AAU Finfinnee irra
Gummi Bilisummaa Oromiyyaa ta’uu irrati Waaddaa fi kakkuu wal galee.
Miseensoon ABO, WFDO, OPDO, OBK, ULFO dhaabilee Oromoo hundi miseensa gummi Bilisummaa Oromiyyaa ta’uu irrati Waaddaa fi kakkuu wal galee.
Oromoon ilmaan hadha fi Abbaa tokkoti, rakkon, kayyoon, biyyi keenya tokko, gidiraan, reebamuun, dararaami, hacucucaacan, ajeechaan, hidhan biyya ari’atamuun hadha, abbaa, obboleeti fi obboleessa keenya irra ga’uu ilee tokko.
Lafa Oromoo guguramee dhumee, bishan fi lagi Oromiyya hundi suma'ee badee, Oromoon qee’ee isaa irra bu’qayee hormaf dhagga batee hojeetaa jira. Baqatoon keenya ilee biyya baqatantii dararama ajeefama jiru, Kenya, Yemen, Somaila, Sudan, Ugandati Oromoo irraa waan ga’aa jiru waan dhala namaf hin malee dha.
waraqisaa kan kasee dhabba kami iyuu utuu hin tanee rakko ummata irra ga’uu fi haalaa adunyan, bu'aa technoloji amayaa adunyatuu waraqisaaf sababa ta'aa jira. Nu warii wagga 130 gabrumaa jala jiru utuu jiru, habashan moofan waraqisati fayadamee siirna moofa sun deebisuuf wixifata, ilmaan Tigray ummataa keenya akka horii itiin faydama jiru ilee nuti faydamtee waraqisa dhamsuuf yaala jira. Unoo mal goocha jira?. Yerrro jari nu nyachuuf nu irrati wal lolan amalee wal qoodnee siirana habasha moof fi hara sun of irra tursuuf hojeecha jira moo? Garbumaan nu ga’ee ummaati keenya bilisomee abba biyya ta’uu qaba jeene wal taannee bilisummaa labsuuf qoopha’aa jira? Kanafuu ummaani millioona 50 ganda, aannaa, Zoni fi Oromiyya gutuu bilisoomusuuf baratooni fi oggaan waraqisaa biyya keessa dhalatuu qabanee ka’uun ama. Waamichi keenya tokko waaddaa fi kakkuu wal galuu:: Wal jibuun, haloo wal irrati ba’uun, wal himmachuun dhiifnee, midha wal irran geesifnee hunda bilisummaa saba keenya basuun badiin keenya hundi ni qulqula’aa. Yaakka keenya hundaaf dhiifami ni godhama. Wara Bilisummaa Oromiyya deegere hundaaf. Miseensoon ABO, WFDO, OPDO, OBK, ULFO dhaabilee Oromoo hundi tokko ta’uuf miseensa gummi ykn partii Bilisummaa Oromiyya ta’uuf wal galee. Rakkon keenya garbumadha yoo bilisoomnee Oromiyyan nu ga’aa lammi ofif hojeechuuf dirre baala qabna. Ummataa of bilisoommsuu caalaa hoji guddan hin jiruu, galata fi kabajaa kan arigatan wara guyya dhummaa ilee hatatuu Bilisummaf dhaabatanfii Oromiyya irraat abbaa biyya ni ta’uu.
OPDO yoo gadi galagalchan ABO tatii Meles Zenawai 2004
Miseensoon OPDO Jeecha Meles Zenawai kan yerron itii dhugomsiinuuf ama jeechun dhaamsaa dabarfacha jiru. Meles Zenawai nu miseensoota OPDO akka meesha mana isaati hanga barbadee nuti fayadamee gaafa barbadee yerro babadeeti nu ari’ata, guree mana hidhati nu naqaa jeedhan. Hanga lonii ykn oolaa ilee finciluu dadhabnee waan ini barbadu waggota 20 rawwachaa ture. Finciluu diidun keenya amoo xifummaa nu tufachisee malee bu’aa tokko ilee nu hin argamsifne.
Melese Zenawi kan nu ilaalu akka miseensaa wal qixee tokkoti utuu hin tanee akka meeshati, uni ilee OPDO kan tanee kayyoof utu hin tanee itiin hoji ariganee jirachuuf waan ta’eef, jeecha in OPDO yoo gadi galagalchan ABO tatii nuni jeedhe kana dhugga ta’uu isaa hubanee ummataa keenya birra gooree isaa fonqolchinuu ama ta’uu qaba jeedhan. Yoo waraqisi ka’ee Meles Zenawi baketi nu facasee Tigrayti baqachun isaa waan oluu miti. Meles Zenawi Oromoo waliin wal galee naggan biyya isaati galuu mana ilmaan Oromoo OPDO daabalatee maqaa adda adda keenf hidhati guruun umuri isaa gababsa malee hin dheersu jeedhan.
Meles Tigray galuu ykn biyya baqachuun isaa kan hin olee, uni amoo ummataa keenya fi dhaabbilee Oromoo wara hafaan hunda wal lolu dhifnee gara ummataa keenya goruun seena waraan Egypt rawwatee rawwachuuf qoophidha ta’uu ibasan. Kana yerro jeenuu Miseensi OPDO hund hubannoo kana qaba jeechuu keenya miti waan ta’eef dhaabilee Oromoo fi median hundi dhaamsa keenya kana dabarsudhan OPDO keessa hubannoo ga’aa akka qabatan goochuun gariidha jeedhan jiru. Dhaabilee Oromoo waraqisaa dho’uu malu keessati miseensoon OPDO 3,500,000 ta’aan gara ummata isaan goraan akka falmatan goochuuf nu gargaruu qabuu malee OPDO duukka TPLF ilaalun waregama gudiisa malee akka hin xineesine beeku qabu.
Dargagoon Oromoo dirqama gudda qaba.
Samuun siirna H/Silasee keessati gudate /baratee/, siira Dargi keessati dhitamee kabalamee jirachuu baree, siirna Wayyanee humnan waraqisan ni fonqolchama jeedhe hin amanuu kanaafu dargagoon Oromoo mal goochuu akka adandeesuu namoota qaroo ta'aan qoofa marisisa, naannoo keessan hunda qooradha; humna jiru, qabeenya jiru, diina jiru dursa adda bafadha, gantuu mandara keessa yoo jiratee akka isiin hin takalee enyuma ishee beeka. Namoota Bilisummaa Barbadan waliin dubadha wari kan bakka tokko ga'aan isiin ganuu waan ta'eef. Dhaabbilee Oromoo Misensoota Dhabba Habasha ta'aan irra of egga. Wayee kana seeran isiin dhamana. WFDOn gartuu bilisummaa malee gartuu Habasha moofa sun akka hin tanee beekun gariidha, namoon murasi MEDRAK keessa jirachuu jeechun WFDO medrak jeechuu akka hin tanee beekuu qabdu.
WFDO/Gummi Paarlamaa Oromoo/OORFFO
Dhaamis Keenya yerroo Maraa wara Bilisummaa Barbaduu qoofaf, Oromoo Oromittiichaa wara ta'eef, Sodatuu, Gantuu, hamatuu, jala deemtuu, Ayanaalalatuu, baran kara irra maqauu qabdi. Utuu wal tirsinuu garbummaan wagga 130 nutii lakkobsisee, dhalooni haraan Garbummaa hin feenuu jeedha. Warii weeduu soda weediftan of qusadha. Oromoon hidhamtoota seena utuu hin tanee gantootatuu nu hidhee of irra cirree ba'uu qabna.
Jabadha Dhalooti Harran siiran moofa jalati hin garbonfatamu, aduun dhitee ba'uun ishee hin oluu, abban biyya hundi biyya biyya isaati galuun ni dhufaa;
Ummati wagga 130 dukana jala jiratee ifaa ba'uuf falmachuun isaa hin oluu, bara baran rakko garbumaa, ajeecha, baqatumma, hidhamuu fi dararamuun seena ta'ee ni xumuramaa. Kun yoo jabane. Ykn baranuu hin jiru bilisummaan. barana. Ykn yoomi ilee hin jiru.barana. Ykn yoomi ilee hin jiru.taan barana. Ykn yoomi ilee hin jiru.
website Oromo Parliamentarians Council biyya keessati TPLF akka cufama waan gooteef facebook irra wal erga
Jiradhu rabbi bakka jirtanti hamilee fi muranoo bilisummaf qabdan hajabeesu Dhamisi heeduun marsaa Oromo Parliamentarians Council irrati wagoota sadii gutuu waan cicima Artiles namoota beekamuu 1000 maxansine jira; Erga facebook dhimma waraqisa biyyati er...gamuu guyya guyyan mxanfama: 1. Oromoon Paramida Egypte ijare achi ka'ee isaa ga'ee? 2. Oromoon Bilisommuf mal goochuu qaba? Prof. Muhammad Shamsaddin Megalommatis 3. Rakkon Oromoo Ethiopia mali ? Intervew 6 Dr. Getachew Jigi Demekssa 4. Habashan Atamiti Oromo cabsee lixe?The Evil, Colonial State of Abyssinia (fake Ethiopia) Exposed by Bulatovich, the Envoy of Russia articles bayee kkf 5. Erga atatama yerro yerron 1000 hunda bana ilaali waliif forward godha. Oromoon diina ala fi keessa, gantuu, jalata fi sodatu kara irra maqisuu qaba!! Jiradha Ni moona Shakki tokko ilee hin qabatina!!
Oromoon hundi Ganada, Aannaa, Zoni, fi Oromiyya Bilisommsuu qaba. 24/03/2011
Ummani Oromoo abbaa qabsooti, abbaa waraqisati, mirgia isaa kabachisuu, bilisummaa isaa labsachuuf mirga gutuu qaba. Waraqisa adeema jiru kan fidee rakko ummata irra ga’aa jiruu fi haalaa hubanoo dhal namaa irra ga’een malee sochii dhaabi tokko goodhe miti. Kanaafu ummani Oromo bilisummaa dhabee wagga 130 garboonfatamee garbuma jala ba’uu ala marii gara birran hin jiru. Dhabbi ykn qami kami ilee mirga ummata Oromoo dura dhabachuuf mirga hin qabuu. Kanaaf amoo biyya Oromiyya keessa kan jiru lammiin Oromoo miliyoon 40 kan qabsoo gegesuu ganda’uu lama laman wal gurmeese Qabeenya mootummaa, wajjiralee mootummaa walimaa galati garboonfata ariatee Oromiyya to’achuuf samu isaa amansisee qoophi isaa cimsuu qaba, guyya hara kasssee email, facebook, skypen, Paltak, minredio, teleconference fi bilbilan waan godhamuu qabuu wal dabarsina nu hordoofa.
Dr. Getachew Jigi Demekssa waliin marii sarara Paltak irrati godhamee 19/03/2001
Waraqisi yoomi fi maliif dho’aa ? waraqisi Kaba Afrika deema jiru waraqisa Ethiopiati deemuu maluun wal faktata?
Adunya irrat sadarka bilichina, feedi, gaafi ummatni qabuu, ummani rakko isaa irra ga’uu hubachuuf damaqinsa qabu fi kkf sababefachuun waraqisi egalama. Kun jeechuun siirni ummata sana gegesuu fedhii ummata sana gutuu dhabuu ykn siirti gegesuu dhabuuf fi midha ummata sana irrati gesisifamuu ummatichi fudhachuu dhisuun, finciluu yamuu egaluu jeechudha. Waraqisi bu’uura jijirama fi gudinati. Waraqisi jireenya nama keessatuu; kan ummataa fi kan biyya tokko keessatu rakko jiru akka ifaa ba’uu godhee rakkon sun ilee akka hikamuu gochuuf nama gargara. Dhalii nama erga adunya kana irrati jirachuu egalee kasse waraqisi deema jira, waraqisi gurguran adunya bakka bayeeti nami hundi yaadatu keessa waraqisa amayuma, Parsi komiyuun, Russia (Soviyet Union) Afrika ant-colonial movement kkf, kana malee biyya biyyati amoo yerro hunda waraqisi siirna cunqurassa irrati yerro hunda gegefama jira. Oromo fakkenyaaf wagoota jiranee kana keessa waraqisa ykn fincila gegesssa jira, wara birroon yoo degeramu batee ilee. Sababoota akka waraqisi dho’uu godhan keessa murassa gagababati:
1.Waraqisi ama kun dhalooti haran waan adunyan irra jiru dhaga’uu fi odeefannoo argachuu danda’ee waan dhaga’ee fi arigaa jiru suna of ilee argachuu fi ittin jirachuu feedha waan ta’eef;
2.Mirgi dhala nama adunya irrati egama jiru, yamuu kan isaa mirgi egamuuf diduu; Mirga jirenya foyya’aa, mirga demokrassi, fi bilisummaa argachuu fi itti jirachuu feedha waan ta’eef.
3.Jirenyi ummata ulfacha deemuu, kara birra amoo Gartuun murasi seeran ala garmalee duroma adeemu dalooti harran kun hubachuu danda’uu, Waan isaan arigata arigachuu feedha waan ta’eef.
4. Samicha mootuummoota, malamaltummaan babalacha adeemu, qabeenyi biyya isaa harka namoota murasa keessati qabamee harki gudaan iyoomachuu, jiruu dhabiduma fi gadaduman dagaguun, mootummaan suun akka jijiramuu feedhi ummata guddisa;
5.Waluma galati Harki caaluu harka murassan hacucamuun Harkii guddan kun akka mirgi isaa egamuuf qabsa’uuf diriqama.
Kanaaf kan kana fakatan walti kufaman sababa xiqa dhalatuun akka waraqisi dho’uu goodha. Ergasii booda garuu midha goodhama ture, mirga dhalanama sarbama ture, ---- iffa ba’uu danda’uu. Fakkrnyaf waraqisi Siirna H/Silassse diigee rakko ummaticha irra yerro dheera ture ummaatichi bachuu dandabee utuu jiru, beeli ummataa Waloo amoo waraqisachaaf sababa isaa abida qabsisuu ta’ee. Haile Silassen waqatuu muude jeedhamuu erga kuufee booda yakka ini dalaga ture hundi iffa ba’ee jira. Diktateron bayeen erga kufan booda yaakii isaa ummataa irrati dalgan yamuu dubatamuu nama sukaneessa. Kan Meles amoo kan hunda caaluu mala.
Warqisi Biyya adunya hundu bu’uuri isaa rakko adda adda ummata irra ga’uu, ummatiichi bachuu dadhabee yamuu jijiramaf muratee ka’uu ta’uu erga hubanee, biyya guddata jiran keessati rakkon ummata wal fakktadha, jijirami ilee ni barbachisa, waraqisi ilee godhamuu ni qaba. Garuu biyyi hundi waraqisa wal qixa ni gegesama jeechun siiri miti, sabab isaa hubannoo ummataa wal caalaa, ummataa akka Ethiopia hiyuuma cimmaa keessa jiraf wayee adunya dhaga’uuf redio ilee hin qabneef. Media adunya hin beekuu soba Meles Zenawi guyya guyyan itti himuu dhageefatee jirata. Dhaabilee siyyassa cicimoo fi Ogannota bilichatoo waregama kamiif murannooo qaba hin qaban. Qindeesitoota garii hin qaban.
Kanaafu waraqisi Kaba Afrika fi Ethiopia qabxi kana oli irrati caaqasaman wal fakkatuu fi wal hin fakkanee ilee qabu; wari Araba biyya wal qixumman irra jiratan qabu, adda fi afaan wal qixumman itti fayadaman qabu, rakkoon isaan Motuumma biyya bulchuu keessa namoota Malamaltuuman biyya rakkisan jijirudha. Kan biyya Ethiopia garuu mootummaa jijiruu qoofa utuu hin tanee siirnicha yoo hamatee biyyichaa iyuu jijirdha; kanaf tokko miti:-
Waraqisii Ethiopia rakko heedu qaba, qami hund akka fayyida isaaf oluuf miciruu yaadaa:-
1. Uni ummataa biyya, afaan, amanta, adda fi ilaalcha tokko wara hin qabnee;
2. Uni Mootuummaa qoofa jijiruu utuu hin tanee siirna suna gutuumaati jijiruu dirqama sabab isaa biyyati keessati hojeetan jiruu missensa fi amanama TPLF waan ta’eef, humni warana hundi lamii Tigray waan ta’eef , humni kun hundi waraqisaa dura waan dhabatuuf;
3. Mootummaan taita irra jiru kun lammi isaa fi mootummaa biyya bulchuu tokko goodhee waan jiruuf lamiin Tigray miliyon 3- 4 ta’uu hundi waraqisa kana dura dhabata,
4. Mootummaan kun Dhaabbilee heeduu keessaa nama heeduu bitatee waan jiruu dhaabilee kana akka tokko hin tanee goodhee jira faknyaf ABO, ama ilee haracaatuu achii keessa qabun wal amatnan akka hin jiranee goocha jira;
5. Ummata biyyati wal ta’ee akka TPLF irrati hin kaneef dura amantan waltii busee dhigga wal laqisese of yerro argachuu mala kana ama iyuu Jimmati egalee jira;
6. Dhaabbilee hundi lammi irrati hunda’aan waan jiranaf gufuu xiqoo ishee humee ummatoota biyya Ethiopia wal dura dhabuu ni danda’aa:
7. Waraqisi kun abba dhimma ummatichaaf utuu hin tanee feedhi isaanf goodhachuuf kan waan hunda irrati investi goocha jira dhaabbilee gartuu heedun ni jiru;
8. Diaspora biyya ala keessa namoota heedu waanuma xixiqoon sosobee qabatee jira; kanaaf Hawwasi tokumma dhaabee faca’ee jira, waraqisa gegefamuuf deemu ilee facasuuf maluu Embbasyin Ethiopia hundi ama kana dalaga jiru;
9. Gantoon lammi isaan dhisaan hormaaf mala dha’aa jiran ilee gutanii jiru, isaan ilee waraqisa birra utuu isaan saxilaa;
10. USA fi EU ilee fedhii ummaticha mirkaneesuuf mana haqa jalisan wara of barbadan; wara feedhi isaan egsisuuf haala mijeesaf jiru, degersa gudasi goochaaf jiru, garuu waqayoo isaan birra hin jiruu;
Waraqisa kana keessati Oromoo hirmachuu qaba; Eeyee , abban waraqisicha iyuu Oromoo ta’uu qaba. Ummaati biyya kana keessa hunda caalaa midhamee ana, abban biyya kana ana jeedhe falmachuu qaba; garuu akka warqisaa bara 1970 horma amanee furtuu iti keenuun of fanisudha. Diina amanun keessatuu garbonfata fi garbonfataman wal amanani hojeechuu jeechuun soba. Ana tuu majoritidha kanaafu biyya gegesssa qaba jeechuu yoo danda’ee qoofa gaafi Oromoo deebiyyuu danda’aa kun ta’uu banan dhigga gudda dhagala’uu mala;
Waraqisii ama kun waraqisa bara 1970 caalaa bala gudda qaba yoo Oromoon itti qoopha’uu batee, sababi isaa feedhin namoota dulooman, hoji gegesa jiran fi feedhin Dhaloota Qubee fi wara Habashan dararan heeduun irra ga’ee wal hin siimuu. Kanaafu akkuma bara 1970 sun qoophi male itti seenee hundi wal tanee borcina warii jeedhan wara ama ilee ergamuu barbadan, kun W.DC ta’ee nama dubatuuf salpha ta’aa malee nama biyya keessa ta’ee yaduuf ulfatadha.
Waraqisa kana keessati ga’een dhaabbilee Oromoo mal? Utuu horma of keessa hin galchiin qabsoo fi waraqisaa ummataa Oromoo wal ta’aanee gegesuu qabna, yoo facanne qabsoon Oromoo bakka hin ga’uu; erga abba biyya tanne booda kan feedhi fi ilaalcha qabu dhaabba ijarachuu ni danda’aa. Harra wal facasuun bu’aan isaa diina Oromootiif;
Dhaabbilee Amanta Oromoo mal goochuu qabu, ama yeroo amantan hundi lammi isaaf hojeecha jiru ta’uu beekan Oromoon ani Islama, Kirstiyana, Waqeefata Utuu hin jeedhin ani Oromoo dha jeedhan tokkumman qabsa’uu qabu;
Dhaabbilee Oromo biyya keessa mal goochuu qabu dhaabbilee horma jala deemuu dhisaan lamii isaan qabatan qabsoo gegesu malu; Keesummati Missensoon OPDO miliyoona 2-3 ta’aan hojeetaa, polisi, fi tikka Oromiyya hunda qabatani gartuu Bilisummaa Oromoof qabsa’uu birra dhabachuu qabuu:: Kana booda Gaafi deebi balinan itti fufee yoo danda’ame sagaleen dhiyeesu yaalaa;
Seenaa Oromoo tiin 19/03/2011 00:00
Dhamssa Waldalee Amanta Oromoo hundaaf.
Waldan Amatan Oromoo hundi Bilisummaa Ummataa isaaf waregama basuu qabu
Warii TPLF Ango biyyati fi wajjira biyyati hunda gaafi tokko malee utuu ittifayadaman kun isaa ga’uu didee kara qeesii isaan Aba Pha’uuloos waan barbadan waldakirtan keessati hojeecha jiru, warii isaan falman Amharii ilee muxxaanoo wagga bara dheera walda amantatii fayadaman bitta turan siiri itti faydama jiru. Waldalee amanta Oromoo (Musillim, Kirsityan fi Waqeefatan) tokkumman Bubeen bubisaa jiru lamii keef akka oluu torbanti guyya tokko yerro ummata keessan argitan jijbeessa, Ummaan Oromoo Garbuman itti hadhayee jira. Ummani lafa irrati gabromee mana waqa ilee galuu issati amanta dhabee jira. Museen ummata isaa bilisomsee Musen Oromoo Qes. Gudina Tumsa of du’ee unini Oromoo jeene hara falmanuu kanan nu ga’ee darbee, isiin ilee qabsoo keenya jajabessa, baratoota University, Baratoota sadarka lamafa jira Umataa Garbumaa irrati finciluuf deemu gargara. Ummatii garbormee fi ummatii belayee amatntan hin galuuftii akka Bilisopomnuuf nu gargara. Yoo bilisoomene Paarlaamaa Oromiyya Kiloo 4 keessati bilisummaan amanta kessan hundi ni waqeefatama. Waqii Oromoo nu gargara nu cinna hirira, Sheeki, qeesiin keenya bilisummaa nu basuuf jabachuu qabduu. Warii siyyssa qabsoo diina irrati goochuu dhisaa walti gadii ta’aan isaan teeny hin egnuu iti adeermnee falmanee duna. Du’ii gadhee garbuman jirachuudha.
Democracy, justice, feedom, equality, human right kun hara isaa dhufee? Wagoota 130 yeroo Oromoon abidhan gubamuu maliif hin ture?
Oromoon Demkrasii mata isaa qaba. Waggotaa 130 Habashoon deemokirasi jeecha namoota 5nan tokko Oromoo keessa malaqan bitatan Democracy, justice, feedom, equality, human right jeechoota jeedhan Korojoo isaanti naqatan Oromoo goyyomsuu yaalu, ilmaan Tigray injiree ishee waliin Finfinee yamuu seentu democracy justice kkf jeedha turan garuu waan isaan hojeetan amoo arginee jira. Yerro dubartoota keenyaf dhirra keenyati rorifama ba'ee jeechoon kun essa turan, rakko nu irra ture habashan maliif heedubatiin?? nu hin sobina sobatu qabsoo keenya lafa irra harkisee waan dandeenyu hojeena ababan. Oromoon jeechoota kana ol fanifitani deemetan yoo jiratan maqa keessantu Oromoo dha malee isiin oromoo miti, ykn wara malaqa Habasha fi USA irra argatan bitamtoota. OORFFO nu kan jeenu wal ijaara, lola fi du’uuf of qoophessa, TPLF fi folatoon garboonfata birro lamafi lafa keenya irra milishee hin lixuu. Warii OPDO hara ta’uuf of qoophessitan yoo jiratan warqisaa deema jiruu kana gufachisuu malee waan fidhan hin jiru. Kanaafu muka keenya jalata kara nuti cufee, gufuu nutii ta’uu muree kara irra kassa deemna wal hurursun garbuuma Oromoo dheeresa jira. Ganda hunda, mana barumssa hunda, university hunda fi wajjira hunda keessa jiratii Gaafi, feedhi, hawwi fi abjuu ummataa keenya Bilisummaa Oromoo merkaneesu ala feedhi hin qabnuu. Oromoo dhuggan wal tannee mirga saba keenya sarbamee kabachisudha.
Abban Qabsoosi abban warqisasi Ummataa Oromooti
Oromoon umuriin isaa 15 ol ta’ee rakko Oromoo, hadha garbumaa, goocha Habashoota ni beeka. Xinixaali siyyassa, marii fi bareefama dheeraa gegessu fi dubsuu yerro hin qabu. Kun yerro baleesu qoofa, uni kan jeenu warii Bilisummaa dhugga barbanuu wal ijaree ummataa keenya ijaree waraqisa bilisummaa keenya dhugomsuu geegeesu qabna.
Utuu bareefami fi xinxalii oduun bilisa nu basa’aa ta’ee bara 1970taa, yerro Oromoon waraqisaa biyyati gegesee, hormi abba itii ta’eetuu nu bilisoomsa ture. Ykn gaafa fonqoolchan mootummaa Dargi gegeefam 1989, ykn bara 1998 gaafa TPLF fi Shabiyaan wal butuchan, ykn gaafa 2002 TPLF bakka lamatii wal qoodhe ykn 2005 gaafa ummati keenya wayyanee tufee ari’atee bilisoomana ture. Yerro kana hunda weeduu sodatuu hadhooftuu keenya dhangalasee . Kanaaf waraa dogogora yerro dheeraa dalaguuf fi oduu sodan nu butuchuu irra waan dhaga’uu feenu hin jiru::
Wagga 130 mirga dhabbnee kanaaf filannoon koo Bilisummaa qoofa dha!!
Oromoo wagoota 130 qabsoo irra jira kanaaf dhiggi isaa itti lolassa jira. Qabsoon gaaf tokkof ilee dhabbatee hin beeku. Waan bakka ga’uu tureef qabsoo kana utuu of dubba hin ilaalin soda tokko malee muranno oggana cimma keenu dhabbudhan. Waan hara abban argee kana godhi sana hin godhin nun jeechuuf yaaluus dogogorumma waggota 30 darban kana nu irrati fe’uuf. Kanaafu Ummanani Oromoo keesummatuu dargagoon Oromoo olola burjajeessa odeefamuu dhisee bilisummaa ummataa keenyaf murtee gara isaati qabu murteefachudha. Murtee kunsi lamafa booroo hadha keenya irra diini kami iyuu lafa takku tokko irra akka hin sochoone of irra qolachuudha. Diin diinuma guda fi ciqoo hin qabdu, Tigren hinjireen nyatee utuu tufanuu injiree ishee nu irrati harcafatee nun hinjiran nu nyachiftee of abba biyya tatee teese jirti. Yoo hara qe’ee –Aanna –Zoni – Oromiyya gutuu diina harka basuuf atataman akka wal beeknuuf wal amanun 2_3 wal ijaree oggana keenya bakka hundati qoopheefanee ummataa keenya harka lafa jalan ijaree, bubbee bubusu kana bilisummaaf olchuu yoo hin dandeenye garbumma isaa dhuma jalati kufna. Wal ijaree filaannoo du’aa ykn bilisumma jeene hakkanu. OPDOn ilee dhumma irrati damaqiiti Ummataa kee birra gorii Bilisummaa Oromiyya labsuuf qoopha’ii. Oromoon kana barbaduu oduu utuu hin tanee Bilisummaa qoofa. Du’ii hin oluu bilisummaaf lolan du’uun maqa qaba. Horiin gatii hin qabu Mubarak iyuu malaqa wagga 30 samee billiona 70 deebsa jira. Guyya tokkof ilee abba biyya tanee du’uuf qoophaa waliin hairiraa!!!
Ilmaani boffaa Boffumma, Garbonfatan haraa fi moofa ilee diinuma keenya 04/03/2011
Maqa facebook Gummii Namoota Najjoo fi Nanoshee....... Oromia,europe,Canada and USA. Jeedhuu keessa ergamtoon diinoota keenya ijoolee barartoota Oromo qisasa jirachuu isaan murna kanaaf ibsuu barbana;
Yerro hunda Habashan akka farda nu yabatan gulufuu baran jiru. Jaaraa 21 keessa garuu kun ta'uu akka hin dandeenye amoo beeku walalan, namoon malaqan bitaman tokko tokko akka Habasha jala hiriruu wamicha nu goocha jiru. Wamicha kanati dhimma ba'uun Habashoon ijoolee Oromoo utuu dogogrsuu fi burjajeesu yalan harkati qabanee jira. Namoon kun maqa Gummi Namoota Najjoo fi Naannoshe jeedhun facebook wal qindeesan ummata fi baratoota keessati dogogora ummuni yaaka dalaga jiru, Murna ykn Gummi tokka yoo ijaree namoota achi keessa jiran ta’aa uni garu yoo barbachisee maqa isaan fi suurra isaan ifa gochuu ni dandeenya erga isaani facasa jira waliin. Oromo qulquluu wari tatan hundi Facebook fi Email nama siiritii hin beekne waliin akka qunamti hin goone isiin dhamna. Gummi Paarlamaa Oromoo Gola Oromiyya hunda keessati qunamti cimma fi qaman namoota argachuu danda'amu ijaree jira. Kana ala dogograf akka hin saxilamnee isiin hubachifna feena gaafi yoo qabatan email kana nu erga. Wari biyaa ala gpo.info@yahoo.com, wari biyya keessa wfdo2004@gmail.com
Waaraqsii ummani Oromoo gegesuf deemu Siirna Habasha jalati miti !!!
Of gurgurun ykn dandeeti of gurgurachuun ni danda’ama garuu Umataa Oromo Afaan fajeesiini gurgurun hin danda’amu. Qabsoon Oromoo utuu lubu isaanf hin seesiin qabsa’aa turan itti wareegamans jiru, hangi tokko amoo amalee diree qabsoo jiru. Kan yoomi ilee waan tufaan deebsan hin harabinee gootoon Oromo jiru, gartuun baqatoota amoo wayya’aa qabsa’ooti ufftan itti qabsa’aan mariixiifatan wagga wagan asii ba’aani waa nuti sooba jiru. Gaafi tokko Ji’a 6 keessati Oromiyya bilisoomtee argituu jeedhu, gaafa oduun kun soba ta’ee amoo Dhaabilee Habasha jala yoo hirire ni moona jeedhun achi ass ba’uu. Yoo dandeenya waan hunmana keenya qalbiin hojeechuu yoo dadhabne amoo caaliifnee wara hojeetuu gargaruu malee akka maartuu sawa yaaftee ol gadii nama ofuun of salphisudha
Waaraqsii ummata waaraqisaa Inyumma - Oromummaa, Bilisummaa – Walaabummaa, Abba biyuuma!!!
Waaraqisii Ummani Oromo gegesu waaraqisa Inyumma - Oromummaa, Bilisummaa – Walaabummaa, Abba biyuuma fi Angoo ummata Oromoo mirkaneesuf malee, Waaraqisaa qoonqoo, waarqasia angoo, Waaraqsa malaqa hirachuu miti. Kanaafu feedhi Oromoo waaraqisaa adunya irrati deema jiru kana keessati feedhi dachaa qaba. Feedhini Ummata Keenya Melesa busaani Gabre ta’iita irra basuuf utuu hin tannee qabsoo waggota 40 ol lubun Oromoo qaqalii itti wareegame sun bakkan ga’uudha. Seena Qabsa’oota dhuga diireti kufan sun irranfatani seena Habasha tortora sun fudhatan angoof folachuun hin danda’amu. Seena qabsa’oota dhuga sun gadii ganee seena baqatoota karati qabsooti dabalameeti qabsoo karati gatee diina jala adeemtuu Oromoo hin fudhatuu kana beeka. Qabsoo wagga 40 kana keessa mani hunda keenya lubu itti waregera dhiga mucaa isaanin qabsoo deema ture, Oromoon qabsoo kana harka Habashati galchuu hin feedhu, abba qabsoo kana ummataa Oromoo feedhi fi gaafiin isaa kabajamuf qaba. 26/02/2011
Missensoon fi Degerooni GPO Oromiyya fi Biyya ala jirtan hundaaf. Garbuma abida caalaa nama gubuu kana jala ba’uuf waan yerroo itti keenan miti. Wagga 100 ol wayee garboomu keenya qoffa odeesssa jira. Ama yerron jiru xinnodha, kara arigamee wal ijararun caassa biyya keessa qabun hunda ubannoo ga’aa keenufiin murteessadha. Miseensoon keenya Kummotan lakkwaman, Oromoo nu filatee milyoonnoota heedun lakkawamu, Oromoon Milyoona 50 jeene lubuu lakkofnu kun hund Bilisummaa Oromiyyaf lubuu isaa waan hunda caalaa isaa marartu wareegun qanii fi salphina murna xiinnoo garbomu jala ba’uuf muranno kee baraba ibsuu qabda. Zoni Oromiyya, Aannoole Oromiyya 200 ol keessa fi Gandalee Oromiyya 6000 ol ta’aan keessati cassan keenya sochosaa jira. Waan hunda dhossa fi icitiin waan deemuu qabuuf akkata wal beektan fi wal hubataniin wal gurmeessa. Cassa keenya hunda qunamtii cimman diiin irrati hin damanqinee deemu qaba. Oromoo kan tatan Habasha Mofa fi Habasha haraa hunda irra of egii.
Oromoon uni hidhamtoota seena miti. Ilmaan Habasha ummata Oromo walaka isaa Harka fi Harma mura Annooleeti fi Ficiinssa Calii Calanqoo hiranfadha waara nun jeedhanf gaaf tokko deebi keenaf, Oromo caalaa Habasha firnofachuuf wara folatan waan isaan duba jiru yerron iffa basa. Garuu Oromoo hara ogana keeti oromoon jeecha Oromoo facasan fi diina jala nu hirirsuf ta’iita ergisa malaqa liqii fudhachuuf figgan of hadabachuu qabu. Dhaabi isaan ilee qoratee siiresu qana. Miseensi GPO kami iyuu diina nutii seene nu diiguuf lukee nu keessa barbadacha jiru of irra dhorkuu qaba. Dogogori bara bara barana xumuramuu qaba:: 25/02/2011
Maliif utuu ilaltu diina amantee salphachuuf deemta? Nu ga'aa dogogruu dhisaaUmmani Oromoo bakka jiruti akka wal beekuu fi wal amanun 2-3 wal gurmeesu qabu. Oromoon samuuni isaa nagga qabuu lamafaa HABASHA waniin dhabachuuf deemuu hin qabu. Keesummati Baratoon Oromoo (Qubee Generation) ta’aan afaan Oromoon baratan bori isaan egeeree isaan qanii keessa basuuf falmachuu qabu. Namoon tokko tokko Susi ykn Aradda Habasha sun isaa dhisuu didde achumati deebiyuu. Nu ga’aa, Dhissii wayee diian jala deemu, nu siif geenya oromo::
Oromoo Bilisummaa Oromoo Barbadan hundi Waltajiin kun Kan Keessan, Habasha Mofa fi Habasha Hara irra warii qulquluu tatan waliin hasoochoonu yerron hin jiru. Akkuma ergan kara Emil isiin erga jiruti wal dukka dhabana. Horma jala hirira waan jeedhu kan hin fudhanee ta'uu Ummani keenya jala sararee nu ibsee jira.
Diina jala hin hiririin dogogra darbee hin dabaliin?
· Gobana Oromoo lole cabsee of diinan cabee kun dogogora;
· Habtagorgis Abban mala Diinaf male lammi cabsee of malachu dadhabe,
· Bayai Zeleqe diinaf lolee diina booden isaa diina badee;
· Tafari Banti diina amanee diina kabajee kabaja seena dhabee;
· Balay Zalaqe Diina lole boode seena dhabbe;Tafari Bante diina amane lubu isaa fi mucca isaa galafate;Maliif utuu ilaltu diina amantee salphachuuf deemta? Nu ga'aa dogogruu dhisaaHaile Fida beekuma isaa boone Tikke harkati kufee;
· Damsee Bultoo Lencaa Saree amana sareen nyatame;
· Marid Nugusee humana fi beekuma qabu qabate diina nyatame;
· Nagasoo Gidada fira dhisee diina amane boode salphate;
Balay Zalaqe Diina lole boode seena dhabbe;
Tafari Bante diina amane lubu isaa fi mucca isaa galafate;
Maliif utuu ilaltu diina amantee salphachuuf deemta? Nu ga'aa dogogruu dhisaa
Nu ga’aa Oromoo
Nu ga’aa garbuman;
Nu ga’aa Habasha Amanun:
Nu ga’aa nama duba dhabachuun;
Nu ga’aa murna nu gadditiin hajejamun;
Nu ga’aa biyya keenyati rebamuun;
Nu ga’aa biyya keenyati horman hidhamuun;
Nu ga’aa utuu ilalaalu qabeenya keenya samamun;
Nu ga’aa biyya keenya irra ariamnee biyya hormati ilee dararamun;
Dhisii Ummanii Oromoo hundi dhageesuu??
Dhisii diina irra bituu fi iti gurguruu;
Dhisii hotela diina lixee nyachuu;
Dhisii diina Oromooti firomuu;
Dhisii diinati herumu fi diina fudhu;
Dhisii diinati kara argisisu;
Dhissi diinati lammi kee saxiluu;
Dhisii afaan diinan dubachuu;
Dhisii diina waliin ijaramuu;
Dhisii diina waliin sagaduu;